ပြင်းထန်သော၊ စိတ်ထက်သန်သော၊ အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်နယ်ပယ်များသည်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး မည်သို့အသိပေးနိုင်မည်နည်း (၂၀၁၆) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ဖြစ်သည်
တပ်ဦး။ Psychol, 10 မေလ 2016 ။ | http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00687
ဟယ်လင်အီး Fisher က1, Xiaomeng Xu2, အာသာ Aron3 နှင့် Lucy ကိုအယ်လ်ဘရောင်း4*
1အဆိုပါ Kinsey Institute က, Indiana ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်, Bloomington, IN, အမေရိကန်နိုင်ငံ
2စိတ်ပညာဌာန, အိုင်ဒါဟိုပြည်နယ်တက္ကသိုလ်, Pocatello, ID ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံ,
3စိတ်ပညာဌာန, နယူးယောက်သည် Stony Brook, Stony Brook တွင်, နယူးယော့, အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်
4Neurology ဌာန, ဆေးပညာ၏အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်းကောလိပ်, Bronx, နယူးယော့, အမေရိကန်နိုင်ငံ
Euphoria ပီတိ, တဏှာ, သည်းခံစိတ်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခို, ရုပ်သိမ်းရေးနှင့် relapse အပါအဝင်ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့် Non-ပစ္စည်းဥစ္စာသို့မဟုတ်အပြုအမူစှဲ၏ပြင်းထန်သောရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာပြပွဲအများအပြားလက္ခဏာတွေ၏အစောပိုင်းအဆင့်တွင်တစ်ဦးချင်းစီ။ ကျနော်တို့ရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာ Homo Sapiens ယနေ့ Cross-ယဉ်ကျေးမှုကိုတှေ့မွငျ hominin pair တစုံ-Bond နှင့်မျိုးပွားအားပေးဖို့တစ်ဦးရှင်သန်မှုယန္တရားအဖြစ်4သန်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအားဖြင့်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေ antecedents ကနေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲတဲ့သဘာဝအ (နှင့်မကြာခဏအပြုသဘောဆောင်) စွဲ, ကြောင်းအဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ထောက်ခံမှုဒီအမြင်ကိုအသုံးပြုပြီးဦးနှောက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့လေ့လာမှုများ: ပြင်းထန်သောရင်ခုန်စရာမတ်ေတာ၏ခံစားချက်များကိုလည်းမူးယစ်ဆေးနှင့် / သို့မဟုတ်အပြုအမူစွဲနေစဉ်အတွင်း activated ဦးနှောက်ရဲ့ "ဆုလာဘ်စနစ်," ဟုအဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာအပါအဝင်အထူးသ dopamine ကြွယ်ဝဒေသများ, ၏ဒေသများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံ။ ထို့ကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်းတဲ့အကွာအဝေးနှင့်အတူရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာရှယ်ယာဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း၏အတှေ့အကွုံသောကွောငျ့ကမူးယစ်ဆေးနှင့် / သို့မဟုတ်အပြုအမူစွဲတုံ့ပြန်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ အမှန်စင်စစ်နေ့ချင်းညချင်း abstinent ဆေးလိပ်သောက်တဲ့လေ့လာမှုပြင်းထန်သောရင်ခုန်စရာမတ်ေတာ၏ခံစားချက်များကိုစီးကရက် cue-reactivity ကိုနဲ့ဆက်စပ်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု attenuate ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ လူမှုရေးအရကြိုးအတွေ့အကြုံများမူးယစ်ဆေးနှင့် / သို့မဟုတ်အပြုအမူစှဲများအတွက်ကုထုံးဖြစ်နိုင်မည်နည်း ကျနော်တို့အချစ်ဇာတ်လမ်းများကဲ့သို့အတွေ့အကြုံများ "ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချဲ့ထွင်" နှင့်တဦးတည်းရဲ့အသိပညာ, အတွေ့အကြုံနှင့် Self-အမြင်ချဲ့ထွင်ကြောင်းအကြံပြုလည်းမူးယစ်ဆေးနှင့် / သို့မဟုတ်အပြုအမူစွဲအပြုအမူတွေကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ပူးတွဲမှုထက်ပိုသောပလပ်စတစ် forebrain ဒေသများထိတွေဆက်ဆံမှုပြုလုပ်ပါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထို့ပြင်ရင်ခုန်စရာမတ်ေတာ၏ခံစားချက်များကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်ပူးတွဲမှု၏ခံစားချက်များကိုသို့တိုးနိုငျသောကွောငျ့, နှင့်ရေရှည်မှတဆင့်ဤအ forebrain စနစ်များကို Activation မြှင့်တင်အားဖြင့်ပစ္စည်းဥစ္စာနှင့် / သို့မဟုတ်အပြုအမူစွဲကူညီစေခြင်းငှါကုထုံးတစ်ခုကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်လည်းမရှိ အုပ်စုတစ်စုကုထုံးအပါအဝင်အခြားသူများအား, အေးဆေးတည်ငြိမ်, အပြုသဘောပူးတွဲ။ စွဲနေတဲ့အနုတ်လက္ခဏာဟာလူဦးရေများအနက်အချို့သာလျှင်အတွက်ပေါ်လာသော (အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်) ရောဂါထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်ရှိ၏ ရင်ခုန်စရာမေတ္တာတော်ကိုမကြာခဏနီးပါးလူသားအားလုံးအားဖြင့်ကြုံတွေ့နေတဲ့အပြုသဘော (အဖြစ်အပျက်သဘော) ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သည်နေစဉ်။ ထို့ကြောင့်သုတေသီများဓာတုသို့မဟုတ်အပြုအမူစွဲအဖြစ်ရင်ခုန်စရာမေတ္တာတော်ကိုခွဲခြားကြပြီမဟုတ်။ သို့သော်ရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာအပေါ်ဒေတာလက်ခံအသုံးပြုပုံကြောင့်တစ်ဦးပြောင်းလဲ, သဘာဝမကြာခဏအပြုသဘောဒါပေမယ့်လည်းအားကောင်းအနုတ်လက္ခဏာစွဲအဖြစ်ခွဲခြားနှင့်များစွာသောပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့် Non-ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းပြည်နယ်များမှ၎င်း၏အာရုံကြောတူရဲ့, Clinician တစ်အကွာအဝေးသက်သာစေနိုင်ကြောင်းဖို့ပိုပြီးထိရောက်တဲ့ကုထုံးချဉ်းကပ်မှုဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းငှါ ကြေကွဲဖွယ်-တစ်ခုယောင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သောနီးပါးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အတွေ့အကြုံ, လက်တွေ့စိတ်ကျရောဂါ, သတ်သေ, လူသတ်မှုနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှု၏အခြားပြစ်မှုများအပါအဝင်စှဲ။
ကျနော်တို့ (ရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာတစ်ဦးမှာသဘာဝစွဲကြောင်းအဆိုပြုFrascella et al ။ , 2010) နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေ antecedents (ထံမှပြောင်းလဲကြောင်းFisher က et al ။ , 2006) ။ ဦးနှောက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့လေ့လာမှုများပြင်းထန်သောရင်ခုန်စရာမတ်ေတာ၏ခံစားချက်များကိုထိုကဲ့သို့သော ventral အဖြစ်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲနှင့်ဆက်စပ်မူလတန်းဒေသများအပါအဝင်ဦးနှောက်ရဲ့ "ဆုလာဘ်စနစ်," စွမ်းအင်, အာရုံ, သင်ယူခြင်း, လှုံ့ဆျောမှု, ecstasy နှင့်တဏှာနဲ့ဆက်စပ်အထူးသ dopamine လမ်းကြောင်း၏ဒေသများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံကြောင်းကိုပြသ tegmental ဧရိယာ (VTA), caudate နှင့် accumbens (Breiter et al ။ , 1997; Bartels နှင့် Zeki, 2000, 2004; Fisher က et al ။ , 2003, 2005, 2006, 2010; Aron et al ။ , 2005; Ortigue et al ။ , 2007; Acevedo et al ။ , 2011; Xu et al ။ , 2011) ။ ရင်ခုန်စရာမေတ္တာနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲနှင့်အတူဆက်စပ် mesolimbic စနစ်၏, ဤဆုလာဘ်ဒေသအများအပြားကိုလည်း (အစားအစာဆွဲဆောင်၏ကြည့်ရှုပုံရိပ်တွေအပါအဝင် Non-ပစ္စည်းဥစ္စာသို့မဟုတ်အပြုအမူစွဲနေစဉ်အတွင်း activated နေကြတယ်ဝမ် et al ။ , 2004), စျေးဝယ် (Knutson et al ။ , 2007), ဗွီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်း (Hoeft et al ။ , 2008), နှင့်လောင်းကစားဝိုင်း (Breiter et al ။ , 2001) ။ အမှန်စင်စစ်အများအပြားသုတေသီများ ( "စွဲအကျိုးကိုစနစ်၏တစ်ဦးရောဂါဖြစ်ပါသည်" သောအနေအထားကိုယူကြပြီRosenberg ကနှင့်ဖက်ဒရယ်, 2014) ။ ထို့ပြင်မေတ္တာစိတ်တပ်မက်ကြသည်နှင့် / သို့မဟုတ်မေတ္တာပယ်ချခဲ့သူကိုယောက်ျားနှင့်မိန်းမတဏှာ, ခံစားချက်ပြုပြင်မွမ်းမံ, သည်းခံစိတ်, စိတ်ခံစားမှုအပါအဝင်ပစ္စည်းဥစ္စာ-related နှင့် Diagnostic စာရင်းဝင်လောင်းကစားစွဲခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders-5 ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်၏အခြေခံလက္ခဏာများပြနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာ။ Relapse တစ်ဦးပစ္စည်းဥစ္စာနှင့် / သို့မဟုတ်အပြုအမူစွဲနှင့်အတူခံစားနေရပြီးသူတို့အဘို့အဖြစ်ပယ်ချခဲ့ချစ်သူများအကြားမှာလည်းတစ်ဘုံပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။
အသည်းအသန်ရင်ခုန်စရာစျြခွငျးမတ်ေတာမှန်မှန်အားလုံးစှဲနှင့်အတူဆက်နွယ်နေစရိုက်များတစ် suite ကိုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်သောကြောင့်, အတော်ကြာစိတ်ပညာရှင် (ရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာအလားအလာတစ်ခုစွဲဖြစ်လာနိုင်သည်ကိုယုံကြည်ဖို့လာကြပြီPeel, 1975; Tennov, 1979; မုဆိုး et al ။ , 1981; Halpern, 1982; Schaef, 1989; Griffin-Shelley, 1991; Mellody et al ။ , 1992) ။ သို့သော်များစွာသော (ကရောဂါဗေဒ, ပြဿနာရောဂါအဖြစ်စွဲသတ်မှတ်Reynaud et al ။ , 2010); ရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာအများအပြားခွအေနမြေား (ဆိုလိုသည်မှာမဟုတ်ဘဲအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်) အရတစ်ဦးအပြုသဘောအတှေ့အကွုံသောကွောငျ့နှင့်သုတေသီများတရားဝင်အနေနဲ့စွဲလမ်းအဖြစ်ရင်ခုန်စရာမေတ္တာတော်ကိုခွဲခြားဖို့ချီတုံချတုံရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ရင်ခုန်စရာမေတ္တာတော်ကိုအန္တရာယ်အဖြစ်မှတ်မရနိုင်လျှင်ပင်ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုပြင်းထန်သောတဏှာနှင့်ဆက်စပ်နေသည်နှင့်အန္တရာယ်နှင့်မသင့်လျော်သောအရာတို့ကို, ယုံကြည်ပြောလုပ်ဖို့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့လှုံ့ဆျောနိုငျသညျ။
အရက်, opioids, ကင်း, အမ်ဖီတမင်း, ဆေးခြောက်နှင့်ဆေးရွက်ကြီး Activate ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းအပါအဝင်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအားလုံးသည်ပုံစံများ, (Breiter et al ။ , 1997; Melis et al ။ , 2005; Volkow et al ။ , 2007; Frascella et al ။ , 2010; Koob နှင့် Volkow, 2010; ဒိုင်ယာနာ, 2013), အမူအကျင့်စွဲလမ်းအများအပြားလုပ်ပေးအဖြစ် (ကြည့်ရှု Cuzen နှင့် Stein, 2014); ဤတူညီသောဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းအများအပြားကိုလည်း (မေတ္တာ၌ပျော်ရွှင်စွာနေသောယောက်ျားမိန်းမတို့အကြား activated ခံရဖို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့အဖြစ်မေတ္တာ၌ပယ်ချရှိသူများဖြစ်ကြောင်းBartels နှင့် Zeki, 2000, 2004; Fisher က et al ။ , 2003, 2010; Aron et al ။ , 2005; Ortigue et al ။ , 2007; Acevedo et al ။ , 2011; Xu et al ။ , 2011) ။ ဒီတော့မသက်ဆိုင်ယင်း၏အရာရှိတဦးကရောဂါရှာဖွေခွဲခြား၏, ကျနော်တို့ (ရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာတစ်ခုစွဲအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ကြောင်းအဆိုပြုFisher သည် 2004, 2016): ရင်ခုန်စရာမေတ္တာတော်ကိုတဦးတည်းရဲ့ခံစားချက်တွေကိုလူမှုရေးအရမသင့်လျော်သည့်အခါတစ်ဦးအပြုသဘောတဦးတည်းရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတုံ့သောအခါစွဲ, Non-အဆိပ်အတောက်များနှင့်သင့်လျော်သော, တစ်အနုတ်လက္ခဏာစွဲ, အဆိပ်, ပယ်ချခဲ့တရားဝင်သဘောတူနှင့် / သို့မဟုတ်မ (Fisher သည် 2004; Frascella et al ။ , 2010).
ရိုမန်းတစ်ချစ်အမှတ်စဉ်လူမှုရေးစျမယား၏ဆင့်ကဲနဲ့လူ့မျိုးဆက်ပွားမဟာဗျူဟာ၏လျှို့ဝှက်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်-ထူးခြားချက် (နှင့် တွဲဖက်. သန်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း hominin clade ၏ Basal ဓါတ်ရောင်ခြည်အချို့ 4.4 မှာပြောင်းလဲခဲ့ကြပေမည်Fisher သည် 1998, 2004, 2011, 2016) ။ ယင်း၏ရည်ရွယ်ချက်သူတို့ရဲ့ငယ်ရွယ် (အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်အတူတကွအရှင်နောက်ဘက်မှတစ်စုံ-နှောင်ကြိုးများဖွဲ့စည်းရေးစတင်, တစ်ကြိမ်တစ်ခုတည်းမိတ်ဖက်အပေါ်သူတို့ရဲ့မိတ်လိုက်အချိန်နှင့်စွမ်းအင်အာရုံစိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေရဲ့မျိုးရိုးလှုံ့ဆျောခဲ့ကြပေမည်Fisher သည် 1992, 1998, 2004, 2011, 2016; Fisher က et al ။ , 2006; ဖလက်ချာ et al ။ , 2015) ။ ထို့ကြောင့်လူ့ဆငျ့ကဲထုတ်ကုန်အဖြစ်စိတ်ကူးယဉ်မေတ္တာနှင့်အိမ်ထောင်ဖက်ကို attachment များအတွက်အာရုံကြောစနစ်များကိုလူတို့တွင်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးစနစ်များအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်။
စွဲ-ကဲ့သို့ပင်အစောပိုင်းအဆင့်အတွက်အပြုအမူ, စိတ်အားထက်သန်မိတ်ဆွေတို့ကို: Euphoria ပီတိ, obsessive, အန္တရာယ်များအပြုအမူ
ပြင်းထန်သောအသည်းအသန်ရင်ခုန်စရာစျြခွငျးမတ်ေတာ၏အစောပိုင်းအဆင့်တွင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအားလုံးစွဲနှင့်ဆက်စပ်အခြေခံစရိုက်လက္ခဏာများစွာကိုဖော်ပြ (Tennov, 1979; Liebowitz, 1983; Hatfield နဲ့ Sprecher, 1986; Harris က, 1995; Lewis က et al ။ , 2000; Meloy နှင့် Fisher, 2005; American Psychiatric Association, 2013) ။ အားလုံးစွဲလိုပဲသူတို့ရဲ့ချစ်ရာသခင်သည် (salience) ကိုအာရုံစိုက်; သူတို့ (တဏှာ) ကိုချစ်ရာသခင်သည်အဘို့အတောင့်။ မြင်နေသို့မဟုတ်သူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏ (Euphoria ပီတိ / မူးယစ်) အကြောင်းကိုစဉ်းစားသည့်အခါသူတို့ကရတာဟာတက "အလုအယက်" ခံစားရတယ်။ သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်သကဲ့သို့, ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ချစ်သော ပို. ပို. မကြာခဏ (သည်းခံစိတ်) နဲ့ဆက်ဆံဖို့ရှာတတ်၏။ ဆက်ဆံရေးချွတ်ချစ်သောလပ်ချိန်လျှင်, ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ဆန္ဒပြ, စာလုံးပေါင်းငို, lethargy, စိုးရိမ်စိတ်, အိပ်မပျော်, ဒါမှမဟုတ် hypersomnia, အစာစားချင်စိတ်သို့မဟုတ်မူးရူးစားဆုံးရှုံးမှု, ဒေါသထွက်စေပြီးနာတာရှည်အထီးကျန်အပါအဝင်လွန်းမူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာ၏ဘုံဆိုင်းဘုတ်များ, တွေ့ကြုံရသည်။ အများဆုံးစွဲကဲ့သို့ပင်ချစ်သူများကိုလည်းမကြာခဏ (ပင်တစ်ခါတစ်ရံချစ်ရာသခင်သည်ပြန်အနိုင်ရစော်ကားသောသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်များသောအရာတို့ကိုလုပ်နေတာ, အစွန်းကိုသွားပယ်ချMeloy, 1998; Lewis က et al ။ , 2000; Meloy နှင့် Fisher, 2005) ။ ရိုမန်းတစ်မိတ်ဖက်ပင်အခြားအဘို့အသေယဇျပူဇျောဖို့လိုလိုလားလားဖြစ်ကြသည်။ ရိုမန်းတစ်မယားကိုမယုံအထူးသဖြင့်အန္တရာယ်နှင့်လူသတ်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်သတ်သေအပါအဝင်အဓိကပြစ်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ချစ်သူများလည်းမူးယစ်ဆေးစွဲပြုပါလမ်းကိုပြန်သွားကြသည်: ဆက်ဆံရေးကျော်ရှည်လျားပြီးနောက်, ဖြစ်ရပ်များ, လူများ, နေရာများ, သီချင်းများနှင့် / သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏စွန့်ခွာရည်းစားနှင့်ဆက်စပ်သည်အခြားပြင်ပတွေကိုအမှတ်တရများဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းတဏှာ, obsessive စဉ်းစားတွေးခေါ်နှင့် / သို့မဟုတ် compulsive ခေါ်ဆိုမှုအစပျိုးနိုင်ပါတယ် , ရေးသားခြင်းဒါမှမဟုတ်အချစ်ဇာတ်လမ်း-နေသော်လည်းသူတို့ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များဆီသို့ဦးတည်စေခြင်းငှါသံသယအဘယ်အရာကို rekindling ၏မျှော်လင့်ချက်အတွက်တက်ဖေါ်ပြခြင်း။
အသည်းအသန်ချစ်သူများကိုလည်းချစ်ရာသခင်သည်အဘို့ခိုင်ခံ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒဖော်ပြ; သေးစိတျပိုငျးဆိုငျရာပြည်ထောင်စုအဘို့မိမိတို့တောငျ့သူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏ (နဲ့အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုအဘို့မိမိတို့တဏှာကိုလှမျးမိုးလေ့Tennov, 1979) ။ အများစုမှာဝိသေသတို့သည်နှစ်သက်ချစ် (ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောစဉ်းစားတွေးခေါ်) အကြောင်းကို obsessive ထင်၏။ Besotted ချစ်သူများ (စလုပ်ပြီးကမြင်းနေကြတယ်, နောက်ကိုလိုက်မခွားမခေါ်ရေးဖို့သို့မဟုတ်မမျှော်လင့်ဘဲပေါ်လာ, အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ချစ်ရာသခင်သည်နေ့ညဉ့်မပြတ်ရှိစေသတည်းဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်စခွေငျးငှါTennov, 1979; Lewis က et al ။ , 2000; Meloy နှင့် Fisher, 2005) ။ ဒီအတှေ့အကွုံမှ Paramount သူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏အနိုင်ရပြင်းထန်သောလှုံ့ဆျောမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်အပြုအမူတွေပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းနှင့်အတူသူတို့အားဘုံဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်လူတိုင်းမ, ဥပမာ (မလူတိုင်းပစ္စည်းဥစ္စာပြပွဲမှီခိုခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာသက်ရောက်မှုကိုအသုံးပြုတဲ့သူနည်းတူတစ်ဦးအဖွဲ့ဟာပြီးနောက်အပြုအမူတွေဤအမြိုးအစားထားပါတယ် Shiffman, 1989; Shiffman et al ။ , 1995; Shiffman နှင့် Paty, 2006; Haney, 2009).
Neuroimaging ပြင်းထန်သော, အသည်းအသန်ရင်ခုန်စရာမတ်ေတာ၏လေ့လာမှုများဒီတစ်လောကလုံးသို့မဟုတ်အနီး-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အတွေ့အကြုံကို၏ဇီဝကမ္မကျောထောက်နောက်ခံပြုထုတ်ဖေါ်, သူတို့ VTA အပေါငျးတို့သပြပွဲ activation (Fisher က et al ။ , 2003, 2010; Bartels နှင့် Zeki, 2004; Aron et al ။ , 2005; Ortigue et al ။ , 2007; Zeki နှင့် Romaya, 2010; Acevedo et al ။ , 2011; Xu et al ။ , 2011) ။ (ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးစမ်းသပ်မှုများတွင်Fisher က et al ။ , 2003; Aron et al ။ , 2005), ကျနော်တို့မကြာသေးမီကမေတ္တာ၌အလှနျနှင့်ပျော်ရွှင်စွာပြိုလဲခဲ့သော 10 အမျိုးသမီးများနှင့်7ယောက်ျားလေ့လာဖို့အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အားလုံး (ပုစိတ်အားထက်သန်မှုမေတ္တာကိုစကေးအပေါ်မြင့်မားသောသွင်းယူHatfield နဲ့ Sprecher, 1986), ရင်ခုန်စရာခံစားချက်တွေကိုများ၏ပြင်းထန်မှုကိုတိုင်းတာတဲ့ Self-အစီရင်ခံစာမေးခွန်းလွှာ; အားလုံးသင်တန်းသားများကိုလည်းသူတို့ချစ်ရာသခင်၏စဉ်းစားမိမိတို့၏နိုးနာရီထက်ပို 85% သုံးစွဲကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
သင်တန်းသားများကိုတနည်းတစ်အာရုံ-အာရုံစူးစိုက်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်အတူလက်ဆွဲ, ၎င်းတို့၏ချစ်သူရည်းစားတစ်ဦးဓာတ်ပုံရိုက်ရန်နှင့်တစ်ဦးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တစ်ဦးချင်းစီ၏တစ်ဦးဓာတ်ပုံရိုက်ရှုမြင်ကြသည်။ Group မှတက်ကြွစွာ VTA နှင့် caudate နျူကလိယအပါအဝင်ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်စနစ်၏အတော်ကြာဒေသများ, (အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်Fisher က et al ။ , 2003; Aron et al ။ , 2005), အပျော်အပါး, ယေဘုယျ arousal နှင့်ဆက်စပ်ဒေသများ, (ဆုလာဘ်ကိုလိုက်နှင့်ဆည်းပူးဖို့အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှုအာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်အဓိကအား dopamine စနစ်ကလှုပ်ရှားမှုကကမကထပြုခဲ့Delgado et al ။ , 2000; Schultz, 2000; Elliott သည် et al ။ , 2003) ။ အကျိုးကိုစနစ်၏ဤအဒေသများတိုက်ရိုက် (အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးအများအပြားလေ့လာမှုများအတွက်စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်Breiter et al ။ , 1997; Panksepp et al ။ , 2002; Melis et al ။ , 2005; Volkow et al ။ , 2007; Frascella et al ။ , 2010; Koob နှင့် Volkow, 2010; ဒိုင်ယာနာ, 2013) နှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်း (ကြည့်ရှု Cuzen နှင့် Stein, 2014).
အတော်ကြာလေ့လာမှုများအနေဖြင့်ဤအ data တွေကိုမူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်နွယ်အာရုံကြောဒေသများနှင့်အချို့သောအမူအကျင့်စွဲလမ်းအတွက်အသည်းအသန်မေတ္တာတော်ကိုအမြန်လှုပ်ရှားမှု၏အစောပိုင်းအဆင့်ပျော်ရွှင်စွာနေသောလူတစ်ဦးချင်းစီကဖော်ပြသည်။
"လို" နှင့်နေဖြင့်အကြံပြု "နဲ့တူ / အပျော်အပါး" ခြားနားလည်းရှိပါသည် Berridge et al ။ (2009)။ ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲကာလ၌ရှိသကဲ့သို့, "လိုက" စိတ်ကူးယဉ်မိတ်ဖက် "ကဲ့သို့" အဆင်းလှသောမျက်မှောက်၌တစ်ဦးတော်တော်လေးမျက်နှာနှင့်တွေ့ရှိချက်အပျြောအပါးကနေကွဲပြားခြားနားသည်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ဆွဲဆောင်မှုမျက်နှာ ( "အကြိုက်") မှဦးနှောက်ကို Activation ချစ်သောမိတ်ဖက် ( "လို") မှ activation ထံမှကွဲပြားခြားနားကြောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့: ဘယ်ဘက် VTA activated ဟောင်း, အဆုံးစွန်သောလက်ျာ VTA activated စဉ် (Aron et al ။ , 2005) ။ အဆိုပါရလဒ်ရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့စွဲလမ်းရှုထောင့်လက်ျာ VTA မှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့ကြသည်အကြံပြုနှင့်ပျော်မွေ့ခြင်း, သို့မဟုတ် "အကြိုက်" ကွဲပြားခြားနားသည်။
တဏှာ, Relapse နှင့်ဖျက်လိုဖျက်ဆီးအပြုအမူ: Romantic ပယ်ချအတူစွဲ-လိုပဲအပြုအမူ Associated
cross-ယဉ်ကျေးမှုအနည်းငယ်ယောက်ျားသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတွေကသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုတစ်လွှားတစ်ချိန်ချိန်ရင်ခုန်စရာငြင်းပယ်ခံရခံစားနေရပြီးရှောင်ကြဉ်ပါ။ တဦးတည်းအမေရိကန်ကောလိပ်အသိုင်းအဝိုင်းများတွင်မေးမြန်းနှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်း၏ 93% သူတို့တပ်မက်ချစ်တော်မူသောသူတစ်ဦးဦးအားဖြင့်မထီမဲ့မြင်ပြုခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံ; 95% သူတို့ (သူတို့နှင့်အတူမေတ္တာ၌နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသူတစ်စုံတစ်ဦးကိုပယ်ချခဲ့ဖူးအစီရင်ခံတင်ပြBaumeister et al ။ , 1993) ။ ဒီအစဉ်အမြဲကိစ္စတွင်ဥပမာမဟုတ်ပါဘူးပေမယ့်ရိုမန်းတစ်ငြင်းပယ်ခံရ, (အရှုံးတစ်လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ် Lewandowski နှင့် Bizzoco, 2007) ။ စွန့်ခွာဒေါသစိတျနှလုံးအအလေးပေးသောကွောငျ့အများအပြားစှဲလိုပဲရင်ခုန်စရာငြင်းပယ်ခံရကိုလည်းတဦးတည်း၏ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်ပါတယ်, (သွေးဖိအားတိုးပွါးလာနှင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကဖိနှိပ်Dozier, 2002) ။ ဒါဟာအစလက်တွေ့စိတ်ကျရောဂါသွေးဆောင်ခြင်း, အစွန်းရောက်ကိစ္စများတွင်သတ်သေနှင့် / သို့မဟုတ်လူသတ်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ တချို့ကကျိုးပဲ့-နှလုံးချစ်သူများပင် (မိမိတို့၏စိတ်ကျရောဂါကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နှလုံးတိုက်ခိုက်မှုသို့မဟုတ်လေဖြတ်ခြင်းမှသေဆုံးRosenthal, 2002) ။ တဏှာနှင့်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေနှင့် တွဲဖက်. ဆန္ဒပြခြင်း, စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု, စိတ်ပျက်ဆွဲဆောင်မှု, စွန့်ခွာဒေါသ, မနာလိုအပါအဝင်မေတ္တာ၌ငြင်းပယ်ခံရနှင့်ဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာဖြစ်ရပ်များ၏ suite ကို, အရှိဆုံးဖွယ်ရှိလည်းစိတ်အားထက်သန်၏ရာဇဝတ်မှုများကို၏မြင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဖြစ်ပွားမှုအထောက်အကူပြု (ကြည့်ရှု Meloy, 1998; Meloy နှင့် Fisher, 2005).
တစ်ခုမှာရောဂါဗေဒကိုလည်းမှန်မှန်နောက်ယောင်ခံရင်ခုန်စရာမေတ္တာနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ stalkers နှစ်ခုဘုံမျိုးရှိပါတယ်: သူတို့ကိုပယ်ချခဲ့ခဲ့သူဟောင်းတစ်ဦးရင်ခုန်စရာ / လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်းနှီးသောလိုက်ရှာရေရှည်တည်တံ့သောသူတို့အား, နှင့် stalker ရဲ့ရင်ခုန်စရာကမ်းလှမ်းချက် (သို့ပြန်လာရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သူတစ်ဦးလူစိမ်းသို့မဟုတ်အသိအကျွမ်းတို့ကိုမှီအောင်လိုက်တဲ့သူတွေကိုMeloy နှင့် Fisher, 2005) ။ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုစလုံးမှာ stalker, သူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အရာဝတ္ထုအပေါ်အာရုံစိုက်အာရုံစူးစိုက်မှုအပါအဝင်အားလုံးစှဲ၏ဝိသေသအစိတ်အပိုင်းများ, အတော်ကြာထားပါတယ်အပြုအမူတွေကိုအောက်ပါ, စွမ်းအင်တိုးလာနှင့်သားကောင်ဆီသို့ညွှန်ကြား obsessive အကြောင်းကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်နဲ့ Impulse ကိုလည်းနောက်ယောင်ခံအကျိုးကို၏ရှုထောင့်မြှင့်လုပ်ဆောင်ကြောင်းအကြံပြု ဦးနှောက်အတွက်စနစ် (Meloy နှင့် Fisher, 2005) နှင့်စွဲလမ်းကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့နေပေမည်။ ထို့အပြင် erotomania အဖြစ်လူသိများနောက်ထပ်ရောဂါဗေဒ, က de Clerambault ရဲ့ syndrome ရောဂါ, စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ဤသည် syndrome ရောဂါအခြားသူတစ်ဦးကသူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏နှင့်အတူမေတ္တာ၌ madly ကြောင်းလူနာရဲ့လှညျ့အယူအဆအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိ၏ ယေဘုယျအားဖြင့်သူကသူမပိုမိုမြင့်မားလူမှုရေးသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရပ်တည်မှု၏လူယောက်ျား၏မတ်ေတာအရာဝတ္ထုကြောင်းယုံကြည်သောသူအမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီရောဂါဆုလာဘ်စနစ်ကလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမတိုက်ရိုက်အသင်းအဖွဲ့ရှိပြီးအကြောက်လွန်ရောဂါ schizophrenia သို့မဟုတ်အခြားလှညျ့ရောဂါ (တစ်ပုံစံဖြစ်နိုင်သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယော်ဒန်မြစ်နှင့် Howe, 1980; Kopelman et al ။ , 2008) မဟုတ်ဘဲစွဲထက်, ဒီ syndrome ရောဂါ၏ဆှေးနှေးခဤစာတမ်း၏အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်ဖြစ်ပါတယ်။
အီဗိုလူးရှင်းရင်ခုန်စရာစွန့်ခွာရန်အအနုတ်လက္ခဏာတုန့်ပြန် overdone မူလျှင်ကြောင့်, သို့သော်, ပုံပေါ်ပါတယ်။ သို့သော် Romantic တစ်ဦးချင်းစီအဖိုးတန်ပိုးပန်းအချိန်နှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်စွမ်းအင်လျော့ကြပါပြီပယ်, သူတို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအရင်းအမြစ်များကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရလေပြီ သူတို့ရဲ့လူမှုရေးမဟာမိတ်ဖွဲ့ထိခိုက်ခံပြီ သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ထုံးတမ်းများနှင့်အလေ့အကျင့်ပြောင်းလဲပြီ သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုဆုံးရှုံးမည် သူတို့ (ကြည့်ရှုသူတို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပျော်ရွှင်မှုကို, Self-လေးစားမှုနဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုအများဆုံးဖွယ်ရှိအတွေ့အကြုံရှိပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ Leary, 2001; Fisher သည် 2004) ။ အရေးအပါဆုံး, မျိုးဆက်ပွားအသက်ချစ်သူများမွေးမြူရေးအခွင့်အလမ်းများဆုံးရှုံးခဲ့ရဒါမှမဟုတ်သူတို့ပြီးသားလျှော့အနာဂတ်မျိုးဗီဇရှင်သန်နိုင်စွမ်း၏-ပုံစံများထုတ်လုပ်ထားသောသားစဉ်မြေးဆက်များအတွက်မိဘအုပ်ထိန်းမိတ်ဖက် (ရှိသည်ဟုများပါတယ်ပယ်ချFisher သည် 2004) ။ ထို့ကြောင့်ရင်ခုန်စရာငြင်းပယ်ခံရပြင်းထန်လူမှုရေး, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, စီးပွားရေးနှင့်မျိုးပွားမှုအကျိုးဆက်များရှိနိုင်သည်။
ရိုမန်းတစ်ပယ်ချလည်းမူးယစ်ဆေးတဏှာနှင့်အတူဦးနှောက်နေရာများ Associated မြှင့်လုပ်ဆောင်
ရင်ခုန်စရာငြင်းပယ်ခံရခြင်းဖြင့်ရူးနှမ်းဒီသဘာဝကတဏှာပြည်နယ်နှင့်ဆက်စပ်သည့်အာရုံကြောစနစ်များအချို့ကိုသိရှိနိုင်ဖို့, ငါတို့မကြာသေးမီကမိတ်ဖက်များကပယ်ချခဲ့ခဲ့သူ 10 အမျိုးသမီးများနှင့်5ယောက်ျားလေ့လာဖို့ fMRI ကိုအသုံးပြု, ဒါပေမဲ့သူတို့ "မေတ္တာမှာ" အပြင်းအထန်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည် (Fisher က et al ။ , 2010) ။ ပျမ်းမျှကနဦးငြင်းပယ်ခံရကတည်းကအချိန်အရှည်နှင့်လေ့လာမှုအတွက်သင်တန်းသားများကို '' ကျောင်းအပ် 63 ရက်နေ၏။ အားလုံး (ပုစိတ်အားထက်သန်မှုမေတ္တာကိုစကေးအပေါ်မြင့်မားသောသွင်းယူHatfield နဲ့ Sprecher, 1986); အားလုံးသူတို့ပယ်ချခဲ့သူစဉ်းစားမိမိတို့၏နိုးနာရီအများဆုံးသုံးစွဲကြောင်းအစီရင်ခံ; လူအပေါင်းတို့ဆက်ဆံရေးပြန်သွားဖို့သူတို့ရဲ့စွန့်ခွာမိတ်ဖက်များအတွက်အလှနျ။
သင်တန်းသားများကိုတနည်းတစ်အာရုံ-အာရုံစူးစိုက်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်အတူလက်ဆွဲသူတို့၏ငြင်းပယ်မိတ်ဖက်များနှင့်တစ်ဦးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်, စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြားနေတစ်ဦးချင်းစီ၏တစ်ဦးဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံ, ရှုမြင်ကြသည်။ သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုဟာစကင်နာ၌မိမိတို့ငြင်းပယ်မှာကိုရှာဖွေနေစဉ်ရင်ခုန်စရာစိတ်အားထက်သန်မှု, စိတ်ပျက်အားငယ်, ရွှင်လန်းခြင်း, နာကျင်အမှတ်တရများ, ဒီဖြစ်ပျက်ခဲ့ဘာဖြစ်လို့အကြောင်းကိုမွေးမြူရေးနှင့်အတွေ့အကြုံကနေသူတို့ရဲ့အကျိုးအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုများစိတ်ပိုင်းအကဲဖြတ်၏ခံစားချက်များကိုပါဝင်သည်။ အဆိုပါငြင်းပယ်ကြည့်ရှုအတူ coupled ဦးနှောက် Active ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်စနစ်၏အတော်ကြာဒေသများတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ; ပြင်းထန်သောရင်ခုန်စရာမတ်ေတာ၏ခံစားချက်များကိုနှင့်အတူဆက်စပ် VTA: ခဲ့ကြသည်ပါဝင်သည် ပူးတွဲမှု၏ခံစားချက်များကိုနှင့်အတူဆက်စပ် ventral pallidum; အဆိုပါနောက်ကျနေခဲ့သည် cortex နဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုများနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုနှင့်အတူဆက်စပ်ဒုက္ခဆင်းရဲတွေနဲ့ဆက်စပ် anterior cingulate; နှင့်နျူကလိယ accumbens နှင့် orbitofrontal / prefrontal တဦးတည်းရဲ့အကျိုးအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုအကဲဖြတ်နှင့်ဆက်စပ် cortex အဖြစ်တဏှာနှင့်စွဲလမ်း (Fisher က et al ။ , 2010) ။ ထိုအဦးနှောက်ဒေသအများအပြားအတွက်လုပ်ဆောင်ချက် (အလွဲသုံးစားမှုကိုကင်းနှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများဘို့တဏှာဆက်နွယ်နေကြောင်းသိရသည်Melis et al ။ , 2005; Frascella et al ။ , 2010; Koob နှင့် Volkow, 2010; ဒိုင်ယာနာ, 2013).
ပျော်ရွှင်အစောပိုင်းအဆင့်ဆက်ဆံရေးနှင့်ရင်ခုန်စရာငြင်းပယ်ခံရနှင့်ဆက်စပ်ညာဘက် VTA Active ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနားလည်ရန်, က "ကဲ့သို့" (hedonic သက်ရောက်မှု) နှင့်ဆုလာဘ်၏ "လို" (ဥပမာမက်လုံးပေး salience) ရှုထောင့်နှစ်ဦးစလုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးပါသည်။ အကြောင်း, ချဉ်းကပ်အပြုအမူသည်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်ဥစ်စာနှငျ့လိုချင်သောအပြန်အလှန်သို့မဟုတ်မ may အမှန်တကယ်ပျြောမှေ့စအတွေ့အကြုံများကိုပါဝင်လိမ့်မည်။ စွဲလမ်း၏အခြေအနေတွင်ကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာဒါမှမဟုတ်အမူအကျင့်စွဲများအတွက်ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒ, ချဉ်းကပ်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အသုံးပြုမှု, ထိုလှုံ့ဆော်မှုမဟုတ်တော့တဲ့ "အဆင့်မြင့်" ကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့်အကျိုးကို-ရှာကြံအပြုအမူအပျက်သဘောနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ပင်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းမကြာခဏအမှုဖြစ်ပါသည် ရလဒ်များ (ဥပမာ, အစွဲဟာတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်ဖြစ်ပါသည်, အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း, လူမှုရေးဆက်ဆံရေးစသည်တို့ကို) ။ မေတ္တာ၌ပယ်ချနေကြသည်သူများသည်နေဆဲဝမ်းနည်းမှု၏ဥပမာအတွေ့အကြုံများကို (အဟောင်းနဲ့အဆက်အသွယ်အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များနှင့်မပျြောမှေ့စသဖြင့်လိုက်ပါသွားမည်အကြောင်းလျှင်ပင် (ထိုဟောင်းမိတ်ဖက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ခွေငျးငှာအလိုရှိသောဥပမာ) အဟောင်းမိတ်ဖက်များနှင့်အတွေ့အကြုံချဉ်းကပ်လှုံ့ဆျောမှု "ချင်" နှင့်နာကျင်မှု) ။ hedonic သက်ရောက်မှုနှင့်မက်လုံးပေး salience အကြားတစ်ဦးကဂုဏ်ထူး (တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအတွက်စူးစမ်းထားသည်Berridge et al ။ , 2009) ။ ငါတို့သည်လည်း (လက်ဝဲ VTA activation လေ့လာမှုမှာမျက်နှာများ၏ဆွဲဆောင်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်းနေစဉ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှာရှာဖွေနေညာဘက် VTA activated မကျြနှာကိုတွေ့ရှိခဲ့Aron et al ။ , 2005).
အစောပိုင်းအဆင့်ထက် ပို. မယ့်ဆက်ဆံရေးအတွက်နေဖို့သောသူတို့က, ပြင်းထန်သောရင်ခုန်စရာအဆင့်အဘို့, ခံစားချက်တွေကို၏အရေးပါသောဒုတိယကြယ်ကို attachment နဲ့ဆက်စပ်အတွက်သတ်မှတ် (Acevedo et al ။ , 2011) ။ မေတ္တာ၌ပျော်ရွှင်စွာနေသောလူတစ်ဦးချင်းစီ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုတွေမှာတော့ (Fisher က et al ။ , 2003; Aron et al ။ , 2005), ကျနော်တို့) ရှည်မိတ်ဖက် (8-17 လအတွင်းသူများ 1-8 လအတွင်းဆန့်ကျင်ကြောင်းတွေ့ရှိရ (တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအတွက်ပူးတွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်ခြင်း, ventral pallidum အတွက်လှုပ်ရှားမှုပြသနိုင်ဖို့စတင်Insel နှင့်လူငယ်တို့, 2001), အသည်းအသန်ရင်ခုန်စရာမေတ္တာနှင့်ဆက်စပ် VTA နှင့် caudate နျူကလိယအတွက်လှုပ်ရှားမှုပြသနိုင်ဖို့ဆက်လက်နေစဉ်။ ထို့ကြောင့်အချိန်နှင့်အတူပူးတွဲမှု၏ခံစားချက်များကိုအသည်းအသန်ရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာ (၏ခံစားချက်များကိုအတူလိုက်ပါရန်စတင်Fisher သည် 2004; Acevedo et al ။ , 2011) ။ ဆက်စပ်နေသောနေရာများတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်, ရင်ခုန်စရာမေတ္တာနှင့်ပူးတွဲဖိုင်ကိုဒီနှစ်ခုကိုအခြေခံအာရုံကြောစနစ်များ (လူ့များ၏ဇီဝအခြေခံအုတ်မြစ်ဖွဲ့စည်း pair တစုံ-Bond-နှင့်ချစ်ခြင်းစှဲ၏ဆင့်ကဲအဘို့ဆက်စပ်ပေးစေခြင်းငှါInsel, 2003; Burkett နှင့်လူငယ်တို့, 2012; Fisher သည် 2016).
ဒါဟာတာရှည်အလုံအလောက်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူဆက်ရှိနေဖို့အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်မှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှုတစ်ဦးချင်းစီကိုလှုံ့ဆော်ဖို့ယန္တရားများအဖြစ်အမှုဆောင်, ပြင်းထန်သောရင်ခုန်စရာမေတ္တာနှင့်မိတ်ဖက်ပူးတွဲမှု၏ခံစားချက်များကိုနှင့်အတူဆက်စပ်အာရုံကြောစနစ်များ pair တစုံ-Bond များအတွက်လူ့ဓာတ်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့် တွဲဖက်. ပြောင်းလဲကြောင်းအဆိုပြုပြီးပါပြီ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်နို့စို့အရွယ်ကတဆင့်သူတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်သားကိုမွေးခြင်းနှင့်နောက်ဘက်မှ (Fisher သည် 2004, 2011, 22016; Fisher က et al ။ , 2006) ။ ဒါဟာအယူအဆ (ရင်ခုန်စရာမေတ္တာနှင့်ပူးတွဲမှုများအတွက်အာရုံကြောစနစ်များကိုဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အမြစ်များနှင့်အတူရှင်သန်ရပ်တည်ရေးစနစ်များဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုFrascella et al ။ , 2010).
Pair ကို-Bond လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်တစ်အမာခံများဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ 97s အတွက် canvassed 1980 လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်ကုလသမဂ္ဂ၏လူဦးရေအချိုးအစားနှစ်ချုပ်စာအုပ်ကနေဒေတာကို (ထိုဆယ်စုနှစ်များတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ၏ 93.1% ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 91.8% အသက်အရွယ် 49 ခြင်းဖြင့်လက်ထပ်ကြောင်းညွှန်ပြFisher သည် 1989, 1992) ။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုနှုန်း ထိုအချိန်မှစ. ငြင်းဆန်ကြပြီ ဒါပေမယ့်ယနေ့ 85 အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ယောက်ျားမိန်းမတို့၏% (လက်ထပ်ဖို့ projected နေကြသည် 90 မှCherlin, 2009) ။ cross-ယဉ်ကျေးမှုအများစုမှာတစ်ဦးချင်းစီ monogamous ပါ၏ သူတို့တစ်တွေအချိန်တွင်လူတစ်ဦးနှင့်အတူတစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုရေးအရဒဏ်ခတ်အရေးယူမိတ်ဖက်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ Polygyny (များစွာသောအမျိုးသမီး) လူ့လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ 84% အတွက်ခွင့်ပြုသဖြင့်, ဒါပေမဲ့အဲဒီယဉ်ကျေးမှု၏ကျယ်ပြန့်အများစုအတွက်, ယောက်ျား၏%5သာ 10 အမှန်တကယ် (တစ်ပြိုင်နက်အများအပြားမယားများရှိဗန်တွင်း Berghe, 1979; Frayser, 1985) ။ လူသားတွေအတွက် polygyny မှန်မှန်ရာထူးနှင့်စည်းစိမ်နှင့်ဆက်စပ်သည်ကို ထောက်. ထို့အပြင်, မယား (ဆိုလိုသည်မှာ pair တစုံ-Bond) (ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှည်လျားလူ့အမဲလိုက်-စုဆောင်းအတိတ်၏ Pre-ဟော်ရီကာချာ, unstratified လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ပို. ပင်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ခဲ့ကြပေမည်Daly နဲ့ Wilson က, 1983), ရသောအခါပြင်းထန်သောအစောပိုင်းအဆင့်ရင်ခုန်စရာမေတ္တာနှင့်မိတ်ဖက်ပူးတွဲမှုများအတွက်အာရုံကြောစနစ်များကိုအများဆုံးဖွယ်ရှိတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။
ဒေတာများကို pair တစုံ-Bond များအတွက်လူ့ဓာတ် (မကြာခဏရင်ခုန်စရာဆွဲဆောင်မှုအားဖြင့်ရှေ့ပြေး) ကိုလည်းဇီဝအခြေခံရှိကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ လူ့ပူးတွဲမှု၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်အတူစတင် Bowlby (1969, 1973) နှင့် Ainsworth et al ။ (1978) သူငယ်ရွယ်၏ရှင်သန်မှုမြှင့်တင်ရန်, မျောက်ဝံများသူတို့ရဲ့အဓိကစောင့်ရှောက်သူများ, ယေဘုယျအားဖြင့်မိခင်ကနေသက်သာခြင်းနှင့်လုံခြုံမှုရှာမွေးကင်းစလှုံ့ဆော်ဖို့ဒီဇိုင်းတစ်ခုပင်ပူးတွဲမှုစနစ်ကပြောင်းလဲကြကြောင်းအဆိုပြုထား။ ဤအအစောပိုင်းလေ့လာမှုများကတည်းကကျယ်ပြန့်သုတေသန (အဆိုပါအပြုအမူအပေါ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသညျလူသားတို့နှင့်အခြားတိရစ္ဆာန်များအတွက်ဒီပူးတွဲမှုစနစ်ဖြင့်ဆက်စပ်ခံစားချက်တွေကိုနှင့်အာရုံကြောယန္တရားများအမှုကိုပြုထားပြီးFraley နှင့်မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်, 2000; Eisenberger et al ။ , 2003; Panksepp, 2003a,b; Bartels နှင့် Zeki, 2004; Macdonald နှင့် Leary, 2005; Tucker et al ။ , 2005; Noriuchi et al ။ , 2008) ။ လောလောဆယ်သုတေသီများ (ဒီဇီဝအခြေစိုက်ပူးတွဲမှုစနစ်ကသားစဉ်မြေးဆက်ပြုစုပျိုးထောင်၏ရည်ရွယ်ချက်တစ်စုံ-ကပ်လျက်တည်ရှိမိတ်ဖက်များအကြားပူးတွဲမှုများအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည်လူ့အသက်ကိုသင်တန်းတစ်လျှောက်လုံးတက်ကြွဖြစ်နေဆဲကြောင်းယုံကြည်Hazan နှင့်မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်, 1987; Hazan နှင့်စိန်, 2000).
Pair ကို-Bond hominin ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက်မဆိုအချက်မှာပြောင်းလဲနိုင်တယ်; ထိုသို့နှင့်အတူ, အမျိုးမျိုးသောမေတ္တာတော်ကိုစှဲ (Fisher သည် 2016) ။ သို့သော်ဒေတာနှစ်ခုလိုင်းများ (လူ့ pair တစုံ-Bond များအတွက်အာရုံကြော circuitry အဆိုပါ hominin စတော့ရှယ်ယာများ၏ Basal ဓါတ်ရောင်ခြည်မှာပြောင်းလဲကြစေခြင်းငှါအကြံပြုFisher သည် 1992, 2011, 2016), တော / လယျပိုငျးအထိခြဲ့ထှ Eco-နယ်ပယ်ဖို့ hominin လိုက်လျောညီထွေနှင့်အတူတွဲဖက်တချို့အချိန်မတိုင်မီနှစ်ပေါင်းသန်းကို BP4မှ Ardipithecus ramidusလက်ရှိ 4.4 နှစ်ပေါင်းသန်းကို BP မှာရက်စွဲပါ, (မျိုးစိတ်များစွာအတွက်တစ်စုံ-Bond နှင့်အတူဆက်နွယ်နေခဲ့ကြပြီအများအပြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစရိုက်လက္ခဏာပြသLovejoy, 2009); ဒါကြောင့် Lovejoy (2009) လူ့စျမယားဤအချိန်အားဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့ကြောင်းအဆိုတင်သွင်း။ မနုဿဗေဒပညာရှင်တွေလည်း re-တိုင်းတာကြပါပြီ Australopithecus afarensis အရိုးမူကွဲများအတွက်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း; သူတို့သည်လေ့လာခြင်းပြပွဲယနေ့ကြောင်း 3.5 နှစ်ပေါင်းသန်းတို့ကကို BP hominins အများအပြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစရိုက်လက္ခဏာအတွက်အကြမ်းဖျင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphism ၏တူညီသောဒီဂရီပြကသတင်းပို့သည်။ ထို့ကြောင့်အချို့သည်ဤ hominins ( "အဓိကအား monogamous" ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပြုခဲ့ကြသည်Reno et al ။ , 2003).
bipedalism ပေါ်ပေါက်ရေး hominin pair တစုံ-bonding (များအတွက်အာရုံကြော circuitry ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက်အဓိကအချက်ဖြစ်ခဲ့ကြပေမည်Fisher သည် 1992, 2011, 2016) နှင့် concomitant ရင်ခုန်စရာမတ်ေတာ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် (နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ကို attachment) စွဲ။ foraging နှင့်သစ်တော / လယျပိုငျးအထိခြဲ့ထှ Eco-နယ်ပယ်များတွင် scavenging နေစဉ်, bipedal Ardipithecine အမျိုးသမီးအများဆုံးဖွယ်ရှိသူတို့သူနာပြုငယ်ရွယ်ပို့ဆောင်စဉ်, အရှင်အိမ်ထောင်ဖက်၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်စီမံလုပ်ကိုင်မှုကိုလိုအပ်နေ, သူတို့ရဲ့လက်နက်အတွက်အစားသူတို့ရဲ့ကျောအပေါ်မွေးကင်းစသယ်ဆောင်ဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းခဲ့ကြသည်။ ဤအတောအတွင်း Ardipithecine အထီးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအခက်အခဲကာကွယ်နှင့်ဤပွင့်လင်းသစ်တော / လယျပိုငျးအထိခြဲ့ထှ Eco-နယ်ပယ်ထဲမှာအမျိုးသမီးတစ်ဦးမိန်းမဆောင်ပေးခဲ့ကြပေမည်။ သူတို့ကပိုကြီးတဲ့အသိုင်းအဝုိင်း၏အနီးအနားအတွင်းအချင်းချင်းအနီးလမ်းလျှောက်အဖြစ်ဒါပေမယ့်အထီးသူမ၏မွေးကင်းစကလေးနှင့်အတူတစ်ခုတည်းအမျိုးသမီးကာကွယ်ရန်နှင့်ပြဋ္ဌာန်းချက်နိုင်ဘူး။
ဒီတော့ hominin တိုးချဲ့နှင့် တွဲဖက်. bipedalism ၏ exigencies တော / လယျပိုငျးအထိခြဲ့ထှ Eco-နယ်ပယ်တစ်စုံ-ကပ်လျက်တည်ရှိမိတ်ဖက်ဖို့ပူးတွဲမှုများအတွက်အာရုံကြောစနစ်ရွေးချယ်ခြင်း "မယားတံခါးခုံ" ဟုအဆိုပါကျော် Ardipithecines တွန်းခဲ့ကြပေမည်သို့။ နှင့်ပူးတွဲမှုအတှကျအ pair တစုံ-Bond နှင့်အာရုံကြောစနစ်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်အတူတစ်ခုတည်းသောအဖော်အပေါ်သူတို့ရဲ့မိတ်လိုက်စွမ်းအင်အာရုံစိုက်ဖို့ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလှုံ့ဆျောနှင့်ခံစားချက်များကိုဖြစ်ပေါ်အောင်ရှည်လျားအလုံအလောက်အတူတကွဆက်လက်ပြင်းထန်သောအပြုသဘောရင်ခုန်စရာစွဲ-်ထမ်းဆောင်ဘို့အဦးနှောက်စနစ်ကပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြပေမည် အလွန်အမင်း altricial ငယ်ရွယ်သူတို့ရဲ့ co-မိဘအုပ်ထိန်းတာဝန်များကိုအစပျိုးခြင်းနှင့်ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်သောပူးတွဲမှု (၏Fisher သည် 1992, 2004, 2011, 2016).
တစ်နို့တိုက်သတ္တဝါတွေကပိုးပန်းယန္တရား၏တစ်ဦးကတီထွင် Form ကိုအမျှလူ့ရိုမန်းတစ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်
စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာဒေတာရင်ခုန်စရာမတ်ေတာအတှကျလူ့ဦးနှောက် system ကိုနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေ antecedents မှထအကြံပြုအပ်ပါသည်။ လူသားမြားသကဲ့သို့ပင်, ရှိသမျှငှက်နှင့်နို့တိုက်သတ္တဝါများအိမ်ထောင်ဖက်ဦးစားပေးပြ; သူတို့ (မိမိတို့၏ပိုးပန်းရုပ်ဆိုးအလားအလာအိမ်ထောင်ဖက်အပေါ်စွမ်းအင်နှင့်အရေးမစိုက်အာရုံစိုက်သို့မဟုတ်အခြားသူများကိုရှောင်ရှားFisher သည် 2004; Fisher က et al ။ , 2006) ။ ထို့အပြင်လူ့ရင်ခုန်စရာမေတ္တာနှင့်ဆက်စပ်အခြေခံစရိုက်လက္ခဏာအများစုတိုးမြှင့်စွမ်းအင်, အာရုံစိုက်အာရုံစူးစိုက်မှု, စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးအောက်ပါအချက်များကို, Affiliate အမူအရာ, ပိုင်ဆိုင်မှုအိမ်ထောင်ဖက် Guard, ရည်မှန်းချက်-oriented အပြုအမူတွေနှင့်ဦးစားပေးမိတ်လိုက်အနိုင်ရနှင့်စောင့်ရှောက်ဖို့လှုံ့ဆျောမှုအပါအဝင်ကိုလည်းနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေပိုးပန်းဆွဲဆောင်မှု၏ဝိသေသများမှာ တဦးတည်းရဲ့မျိုးစိတ်-သတ်သတ်မှတ်မှတ်မျိုးပွားခြင်းနှင့်မိဘအုပ်ထိန်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်များ၏ကြာချိန်အဘို့အမိတ်ဖက် (Fisher က et al ။ , 2002, 2006; Fisher သည် 2004).
လူ့ရင်ခုန်စရာမေတ္တာသည်ဦးနှောက် system ကိုပိုးပန်းဆွဲဆောင်မှုအဘို့နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေအာရုံကြောစနစ်များနှင့်အတူဇီဝတူညီပြသထားတယ်။ အမျိုးသမီးဓာတ်ခွဲခန်း-ထိန်းသိမ်းထားမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အထီးနှင့်အတူ mated သောအခါသူမသည်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine တစ် 50% တိုး (နှင့်ဆက်စပ်, သူ့အဘို့ကွဲပြား preference ကိုဖြစ်ပေါ်လာသောGingrich et al ။ , 2000) ။ တစ်ဦး dopamine ရန်အတွက်နျူကလိယ accumbens သို့ထိုးသွင်းနေသည်သောအခါ, အမျိုးသမီးမရှိတော့ဒီဖက်ကိုပိုမိုနှစ်သက်; အမျိုးသမီးတစ်ဦး dopamine agonist နှင့်အတူထိုးသွင်းနေသည်သောအခါ, သူမ (သူမကဒီအထီးနှင့်အတူ mated မရှိသေးပေပင်လျှင်, ပြုတ်ရည်၏ထိုအချိန်ကပစ္စုပ္ပန်သူ conspecific ကြိုက်တတ်တဲ့မှစတင်ခဲ့သည်ဝမ် et al ။ , 1999; Gingrich et al ။ , 2000) ။ အလယ်ပိုင်း dopamine များ၏လှုပ်ရှားမှုများတွင်တစ်ခုတိုးလည်း (အမျိုးသမီးသိုးပိုးပန်းဆွဲဆောင်မှုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်Fabre-Nys et al ။ , 1997) ။ အထီးကြွက်များတွင်တိုးမြှင့် striatal dopamine လွှတ်ပေးရေးကိုလည်း (ကလက်ခံအမျိုးသမီးကြွက်၏ရှေ့မှောက်တွင်မှတုန့်ပြန်မှာပြထားပြီးရော်ဘင်ဆင် et al ။ , 2002; ဂူ et al ။ , 2004).
လူ့ရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာရှယ်ယာသောကြောင့်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေပိုးပန်းဆွဲဆောင်မှုတွေနဲ့အများကြီးအမူအကျင့်များနှင့်ဇီဝသွင်ပြင်လက္ခဏာများကြောင့်လူ့ရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာကဒီနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေအာရုံကြောပိုးပန်းယန္တရားတစ်ခုဖွံ့ဖြိုးပြီးပုံစံ (ကြောင်းကိုဖွယ်ရှိသည်Fisher သည် 1998, 2004, 2011, 2016; Fisher က et al ။ , 2006) ။ သို့သော်အများဆုံးမျိုးစိတ်အတွက်ပိုးပန်းဆွဲဆောင်မှုရှိသောမိနစ်, နာရီ, ရက်, သို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်တည်တံ့, အကျဉ်းဖြစ်၏ လူသားများတွင်စဉ်ပြင်းထန်သောစောစောဇာတ်စင်ရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာ 12-18 လအတွင်းကြာရှည်နိုင်ပါတယ် (Marazziti et al ။ , 1999) သို့မဟုတ်တာရှည် (Acevedo et al ။ , 2011) ။ pair တစုံ-Bond နောက်ဆုံးမှာအပြုသဘော (သို့မဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာ) ဖြစ်လာခြင်း, ပြောင်းလဲအဖြစ်ဒီတော့အစောပိုင်း hominin စောပိုငျးကာလ၌, ပိုးပန်းဆွဲဆောင်မှုအဘို့ဤနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေအာရုံကြောစနစ်လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်လာကြပေမည်ပိုမိုပြင်းထန်လာခြင်းနှင့်တာရှညျ Cross-ယဉ်ကျေးမှုယောက်ျားမိန်းမတို့သည်ယနေ့ခြင်းဖြင့်ကြုံတွေ့ရင်ခုန်စရာစှဲ။
(ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအပါအဝင်) အရည်အသွေးမြင့်လူမှုရေးဆက်ဆံရေးတစ်ခုစွဲ (ဥပမာအနေဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်သူတို့အားအလွန်အကျိုးရှိသောဖြစ်နိုငျသညျ, Hänninenနှင့် Koski-ယန္နေ, 1999) ။ ဒီအကြိုးအတှကျတစျခုမှာအလားအလာရှိသောယန္တရားဆုလာဘ်အစားထိုး၏မူးယစ်ဆေးစွဲဖို့ကုထုံးချဉ်းကပ်မှုကနေလာပါတယ်။ ဒါက (တဦးတည်းစွဲလမ်းပစ္စည်းဥစ္စာသို့မဟုတ်အပြုအမူဖြတ်, အစွဲတစ်ဦးချင်းစီထိုကဲ့သို့သောဆရာအဖြစ်မကြာခဏပြင်ပအရင်းအမြစ်ကနေချက်ချင်းဘဲ, အကြိုးအပြုအမူ၏အခြားပုံစံနှင့်အတူဤစွဲအစားထိုးသည့်အခါဖြစ်ပါသည်ဒိုနိုဗန်, 1988; Marks, 1990; DiNardo နှင့် Lemieux, 2001; Haylett et al ။ , 2004; ပြောင်းလဲ et al ။ , 2006) ။ ဒီ, စှဲပွုမူဆကျဆံတဲ့သူ Clinician ထိရောက်စွာသစ်ကိုစစ်ကူအတွက်လူနာထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လူသိများကြောင့် (ကြည့်ရှု Bickel et al ။ , 2014ထိုကဲ့သို့သောအားကစားလှုပ်ရှားမှုများအသစ်ဝါသနာနှင့်ပိုပြီးသို့မဟုတ်အသစ်လူမှုရေး interaction ကကဲ့သို့), အထူးသကျန်းမာအစားထိုးစစ်ကူ (ဥပမာ, Vaillant, 1983; Salvy et al ။ , 2009; လျူ et al ။ , 2011).
အစောပိုင်းအဆင့်တွင်အချစ်ဇာတ်လမ်းပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု (သို့မဟုတ်အပြုအမူစွဲ) တွင်စေ့စပ်သူတို့အဘို့ကိုအစားထိုးဆုလာဘ်များကိုရနိုင်မလား? ဤမေးခွန်းကိုလေ့လာစူးစမ်းရန်, Xu et al ။ (2012) ရုံ fMRI သုံးပြီးတစ်ဦးနှောက်စကင်နာသို့မေတ္တာ၌ madly ပြိုလဲခဲ့သော 18 တရုတ်နေ့ချင်းညချင်းနီကိုတင်း-ဆုံးရှုံးဆေးလိပ်သောက်ထားတော်မူ၏။ ဤသူတို့သညျနှငျ့အမြိုးသမီးကိုသူတို့စီးကရက်မဒါလက်တစျခုအလငျးစီးကရက် (cue) သို့မဟုတ်တစ်ဦးခဲတံ (ထိန်းချုပ်မှု) နှင့်၎င်းတို့၏အသစ်ချစ်သူတို့တစ်ခုသို့မဟုတ်အကျွမ်းတဝင်အသိအကျွမ်း (Non-ဆေးလိပ်သောက်၏တဦးတည်းဖြစ်စေကိုင်ဆောင်, side-by-side ဓာတ်ပုံများကြည့်ရှု -cues) ။ စီးကရက် cue လာမယ့် (ထိုအသိအကျွမ်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်) ကချစ်ရာသခင်၏ပုံသဏ္ဍာန်တင်ဆက်သောအခါနီကိုတင်းဖို့အတန်အသင့်စွဲဖြစ်နှင့်သောသူတို့အနက်, လျော့နည်း activation စီးကရက် cue-reactivity ကိုနှင့်ဆက်စပ်ဒေသများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အဆိုပါ caudate ပိုမို activation (ထိုအသိအကျွမ်းရဲ့နှိုင်းယှဉ်) ရဲ့ချစ်ရာသခင်သည်ဓာတ်ပုံများကိုထည့်သွင်းကြောင်းစမ်းသပ်မှုတွေစဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဤရွေ့ကားပဏာမဒေတာကြောင့်အချို့အခြေအနေတွေအောက်မှာတစ်ဦးထက်ပိုသောခေတ်ပြိုင်စွဲ, နီကိုတင်းနှင့်ဆက်နွယ်ဦးနှောက် Active ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်သောကြောင့်ရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာအားကောင်းတဲ့နှင့်ကမ္ဘာသဘာဝအစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ကြောင်းကိုပိုမိုသက်သေအထောက်အထားသည်။
"ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတဦးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သို့အခြားသူများရဲ့ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း" "Self-ချဲ့ထွင်" နှင့်လည်းချစ်ခြင်းမေတ္တာစွဲအပါအဝင်စှဲများအတွက်ဆုလာဘ်အစားထိုးအဖြစ်ပြုမူလိမ့်မည်။
ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်အဆိုပြု Aron နှင့် Aron (1986), ထို Self-တိုးချဲ့မော်ဒယ်တစ်ဦးအခြေခံလူ့လှုံ့ဆျောမှုတစျခုရဲ့မိမိကိုယ်ကိုအယူအဆနှင့်စွမ်းရည်များမြှင့်တင်ရန်နိုင်သောအရင်းအမြစ်များနှင့်အမြင်များရရှိနိုင်ရန်အတွက်ဝတ္ထုထဲမှာပါဝငျခွငျးအားဖွငျ့တစျဦးရဲ့ Self-concept ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဆန္ဒ, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့, စိန်ခေါ်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်အခြားစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရေးရာကြောင်းအဆိုတင်သွင်း (ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ရှု Aron et al ။ , 2013), အဖြစ်သိမ်းသွင်း ထား. အပြုသဘောစိတ်ခံစားမှုနှင့်ဆုလာဘ်ခံစားချက်များကို (Aron et al ။ , 1995, 2000; ခိုင်ခံ့ Aron, 2006) ။ သူတို့ကလျင်မြန်စွာ Self-တိုးချဲ့အစောပိုင်းအဆင့်တွင်အချစ်ဇာတ်လမ်းကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းတင်ပြသည်။
ချဉ်းကပ်နည်းလှုံ့ဆျောမှုအမြစ်တွယ်သောဤ Self-တိုးချဲ့, (ကြည့်ရှု Mattingly et al ။ , 2012ဆေးလိပ်ဖြတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာသို့မဟုတ်အပြုအမူစွဲ၏အသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချရန်ကြိုးစားနေသည့်အခါကတစ်ဦးကိုအစားထိုးခြင်းနှင့်စိတ်အာရုံထွေပြားကြိုးအတွေ့အကြုံကိုကမ်းလှမ်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့), အကျိုးရှိသောဖြစ်နိုင်သည်။ ရင်ခုန်စရာမေတ္တာအခြေအနေတွင် self-တိုးချဲ့ (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှု၏သဘောထားအမြင် attenuate ပြထားပြီးအသက်အရွယ်နုပျိုသော et al ။ , 2010) ကရင်ခုန်စရာငြင်းပယ်ခံရပြီးနောက်ဆုတ်ခွာ၏နာကျင်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါအကြံပြုထားတဲ့မဟုတ်ဘဲအာရုံထက်အကျိုးကိုယန္တရား () မှတဆင့်။ အဲဒါကို (ကစာရေးဆရာ, ဂီတပညာရှင်, ငှက်သစျပငျစောငျ့သို့မဟုတ်သမျှ Self-တိုးချဲ့အတွေ့အကြုံကိုဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုစဉ်းစားရန်စတင်ဥပမာ) Self-အယူအဆပြောင်းလဲမှုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထို့ပြင် Self-တိုးချဲ့လည်းမဆိုစွဲဖြတ်၏အခြေအနေတွင်အကျိုးရှိသောဖြစ်နိုင်ပါသည်သို့ သစ်တစ်ခုနှင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းဦးတည်ချက်များနှင့်ကွာတဦးတည်းရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာကနေ "အသုံးပြုသူ" အဖြစ် (Kellogg နှင့် Kreek, 2005) ။ အသစ်အဆန်းတစ်ခုခုကိုပုံစံစွမ်းအင်နှင့်အကောင်းမြင်အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ဦးနှောက်အတွင်းရှိ dopamine system ကိုမြှင့်လုပ်ဆောင်နေသောကြောင့်အာရုံ, အစားထိုးခြင်းနှင့် redirection ပေးအပြင်, Self-တိုးချဲ့ (ဆိုလိုသည်မှာဝတ္ထု, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနှင့် / သို့မဟုတ်စိန်ခေါ်မှု) လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်, ဇီဝအကျိုးရှိသောဖြစ်နိုင်သည် , အားဖြင့်အလားအလာအစားထိုးဆုလာဘ်ပေး။
အမှန်စင်စစ်သုံးလေ့လာမှုများတိုက်ရိုက်တစ်ခုချင်းစီကိုအတော်လေးအပြုသဘောရလာဒ်များရှာဖွေတာ, နီကိုတင်းစွဲလမ်း၏အခြေအနေတွင် Self-တိုးချဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးပါပြီ။ Ex-ဆေးလိပ်သောက်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကသူတို့မအောင်မြင်ကြိုးစားမှုအပေါ်အစီရင်ခံတင်ပြသူကိုလက်ရှိဆေးလိပ်သောက် (လုပ်ခဲ့တယ်ထက်သူတို့အောင်အောင်မြင်မြင်ဆေးလိပ်ဖြတ်မတိုင်မီသိသိသာသာပိုပြီး Self-တိုးချဲ့အတွေ့အကြုံများတိုက်ရိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်Xu et al ။ , 2010) ။ တောင်မှပြန်ရောက်သွားတယ်သူကလက်ရှိဆေးလိပ်သောက်သူတို့တွင်, ၎င်းတို့၏ကြိုးပမ်းမှုနုတ်ထွက်မတိုင်မီတိုက်ရိုက်ဖြစ်ပေါ် Self-တိုးချဲ့အတွေ့အကြုံများ၏နံပါတ်သိသိသာသာအပြုသဘော (သူတို့ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်ဘယ်လောက်ရှည်လျားဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်Xu et al ။ , 2010) ။ နေ့ချင်းညချင်း abstinent ဆေးလိပ်သောက်နှစျယောကျ fMRI လေ့လာမှုများ (ကရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်နှင့်အတူလှုပ်ရှားမှုများမှတဆင့် Self-တိုးချဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာစီးကရက် cue-reactivity ကို attenuates ကြောင်းအကြံပြုXu et al ။ , 2012, 2014) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာဆေးလိပ်သောက် Self-တိုးချဲ့အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာသူတို့ကဆေးလိပ်သောက်တွေကိုလျော့နည်းတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ရင်ခုန်စရာစွဲ attenuating တစ်ကဏ္ဍမှပါစေခြင်းငှါနောက်ထပ်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်မှာ "ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အတွက်နဲ့အခြားများ၏ပါဝင်မှု" (IOS ကို) ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်ပိုင်ပြောင်းလဲမှုကိုယ်စားပြုတစ်ဦးရင်ခုန်စရာ partner ၏ရှုထောင့်ထည့်သွင်းရန်လာသောအခါဤသည်ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးကစကေး (ဒီသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်ကိုတိုင်းတာရန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့တာပါAron et al ။ , 1992) ။ အချိန်ကျော်မိတ်ဖက်ရဲ့ရှုထောင့်, အထောက်အထားတွေကိုနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုလူတစ်ဦး၏ကိုယ်ပိုင်မိမိကိုယ်ကို၏အဓိပ္ပာယ်နှင့်ကိုယ်ပိုင်နှင့်မိတ်ဖက်မှုန်ဝါးအကြားခြားနားသို့ထည့်သွင်းဖြစ်လာသည်။ (ဥပမာ "ကျနော်တို့" ကဲ့သို့အများကိန်းနာမ်စားကိုပိုမိုသုံးစွဲခြင်းမှ, လူတွေအကူးအပြောင်းနှင့် "ကျွန်တော်တို့ကို"Agnew et al ။ , 1998), နှင့်တဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကနေမိတ်ဖက်ရဲ့ဥစ်စာသို့မဟုတ်စရိုက်များကွဲပြားခြားနားသွားမှာနှေးကွေးဖြစ်လာ (Aron et al ။ , 1991; ပြန်လည်သုံးသပ်တွေ့ Aron et al ။ , 2004) ။ ကိုယ်ပိုင်အယူအဆ၏ဤကြီးထွားနေတဲ့ကုထုံးအခြေအနေမှာထိရောက်တဲ့ဖြစ်ရသောအပြုသဘောရလာဒ် (ဥပမာအပိုဆောင်းအရင်းအမြစ်များ, အပြုသဘောခံစားချက်များသည်), ပေးနိုင်ပါသည်။ အမှန်မှာထို VTA မှတဆင့်အကျိုးကိုစနစ်၏ activation (ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ရဲ့ IOS ကိုရမှတ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်Acevedo et al ။ , 2011), အရာသည်အခြားလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူအပြုသဘောမှတ်ပုံတင်တစ်ခုအလယ်အလတ်ငွေပမာဏကုထုံးဖြင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့အပြုသဘော Self-image ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖွင့်ပေးတော်မူပြီတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာသို့မဟုတ်အပြုအမူစွဲသောသူသည်အကျိုးကိုအစားထိုးပေးအကြံပြုထားသည်။
Clinician ချစ်သူများနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲကူညီမှုအတွက်မဟာဗျူဟာ၏အိမ်ရှင်ရှိသည်။ ရင်ခုန်စရာမေတ္တာနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအပေါ်ဒေတာအတူတူစဉ်းစားကြသောအခါသို့သော်အချို့သောချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုအထူးသဖြင့်ခိုင်ခံ့သောကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ရှိသည်။
သတိပေးချက်များနှင့်မိတ်ဖက်အဆက်အသွယ်ကြောင့်မူးယစ်တက်ပေးခြင်းကဲ့သို့ပယ်ချချစ်သူများ, သူတို့ရဲ့စွန့်ခွာထိုကဲ့သို့သောကတ်များအက္ခရာများ, သီခငျြးမြား, ဓါတ်ပုံများနှင့်အမှတ်တရအဖြစ်ရည်းစား, အဖြစ်ကသူတို့ငြင်းပယ်မိတ်ဖက်နှင့်အတူရှောင်ပါအဆက်အသွယ်ရှိသမျှတို့ကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သက်သေအထောက်အထားများကိုဖယ်ရှားသင့်တယ်, ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အရေးအပါဆုံး တဏှာသွေးဆောင်ခြင်းနှင့်ရင်ခုန်စရာစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ဆက်နွယ်ဦးနှောက်ဆားကစ်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုဆက်ထိန်းခြင်းနှင့်အရှင်သည်အနာပျောက်စေသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနှောင့်အယှက်ဖြစ်ဖွယ်ရှိဖြစ်ကြောင်းတွေကိုအဖွစျဆောငျရှကျနိုငျသညျ။ self-တိုးချဲ့သုတေသနကိုလည်း (ဆက်ဆံရေးအနည်းငယ် Self-တိုးချဲ့အခွင့်အလမ်းများကမ်းလှမ်းခဲ့ပါလျှင်အသစ်တစ်ခုတည်းလူတစ်ဦးကိုယ့်ကိုယ်ကို၏ rediscovery များတွင်ပါဝင်နေလျှင်ထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုးတက်မှုနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်စိတ်ခံစားမှုအဖြစ်အပြုသဘောရလာဒ်တစ်ချိုး-up, အောက်ပါ (ပင်ဖွယ်ရှိ) ဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ကြောင်းတွေ့Lewandowski နှင့် Bizzoco, 2007).
မိတ်ဆွေတစ်ဦးသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူအနီးကပ်, အပြုသဘောအဆက်အသွယ်ကြိုးသည်နှင့်လည်း (ကရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေတစ်ဦးဓာတ်ပုံကိုကြည့်ဆုလာဘ်နဲ့ဆက်စပ်သည့်နျူကလိယ accumbens မြှင့်လုပ်ဆောင်သောကွောငျ့, တ္ထုများများအတွက်တဏှာတစ်ခုသို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ဖက်ကိုအစားထိုးနိုင်ရန်ကူညီစေခြင်းငှါAcevedo et al ။ , 2011) ။ ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေတစ်ဦးဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှာလိုက်ရှာလည်း oxytocin receptors နှင့်ပူးတွဲမှု၏အေးဆေးနှင့်အတူဆက်စပ် periaqueductal မီးခိုးရောင်, မြှင့်လုပ်ဆောင်။ ဤအုပ်စုတွင်ဒိုင်းနမစ်ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်များနှင့်ပူးတွဲမှုစနစ်များကိုထိတွေ့ဆက်ဆံနေသောကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအရက်အမည်မသိနှင့်အခြား 12 ခြေလှမ်းအစီအစဉ်များအဖြစ်အုပ်စုတစုကုထုံး, အောင်မြင်သောဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ အုပ်စုတစ်စုအစီအစဉ်များပါဝင်ပယ်ချချစ်သူများအဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောလောင်းကစားဝိုင်းအဖြစ်အရက်ဒါမှမဟုတ်အမူအကျင့်စွဲနှင့်အတူသူကဲ့သို့တ္ထုများ, စွဲသူတို့အဘို့အရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်သည်။
ဒေတာများ (ပယ်ချချစ်သူများလည်းမိမိတို့ကိုယ်ကိုအာရုံမှအလုပ်ရှုပ်နေဖို့သင့်ကြောင်းအကြံပြုယော, 1996; Rosenthal, 2002) ။ ကစိတ်ဓါတ်များ elevates အဖြစ်ခှနျအားစိုကျထု (အထူးသဖြင့်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်Rosenthal, 2002), နျူကလီးယပ်အတွက် dopamine လှုပ်ရှားမှုထွက်လာပါတယ် (အပျြောအပါးသိုဖို့ accumbensKolata, 2002) ။ လေ့ကျင့်ခန်းလည်းအေးဆေးနှင့်သုခချမ်းသာ (၏နာကျင်မှုနဲ့တိုးခံစားချက်တွေကိုမှုကိုလျော့နည်းစေသောβ-နဲ့အတူ Endorphins နှင့် endocannabinoids ၏အဆင့်ဆင့်တိုးပွါးGoldfarb တို့နှင့် Jamurtas, 1997; Dietrich နှင့် McDaniel, 2004) ။ ဒါ့အပြင်လေ့ကျင့်ခန်း၏အသစ်တစ်ခု form မှာပါဝငျတွေ့မြင် (က Self-တိုးချဲ့အတွေ့အကြုံကိုနိုင်ပါတယ် Xu et al ။ , 2010) ။ သောကြောင့်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများကဤအကြိုးကြေးဇူးမြား၏အချို့စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်လေ့ကျင့်ခန်း (အေရိုးဗစ်သို့မဟုတ်အောက်ဆီဂျင်မဲ့ချေ) psychotherapy သို့မဟုတ်လက္ခဏာမူးယစ်ဆေးဝါးများ (အဖြစ်စိတ်ကျရောဂါကုသပေးကာလ၌ရှိသကဲ့သို့ထိရောက်သောဖြစ်နိုင်သည်ကိုယုံကြည်Rosenthal, 2002).
သူတို့ဆုလာဘ်, ကိုယ်ပိုင်အယူအဆမှအကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်အာရုံပူဇော်အဖြစ် self-တိုးချဲ့လှုပ်ရှားမှုများ (ဥပမာ, ဝါသနာ, အားကစား, ဝိညာဉ်ရေးရာအတွေ့အကြုံများကို) နှစ်ဦးစလုံးစွဲများနှင့်ကြေကွဲဖွယ်၏အခြေအနေတွင်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ (ကမိတ်ဖက်အရွက်ဥပမာ), အရှင်တဦးတည်းမရှိတော့မရရှိနိုင်ဖြစ်လာသင့်တယ်, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကသူတို့အသက်တာ၌ Self-တိုးချဲ့၏တစ်ဦးထက်ပိုအရင်းအမြစ်ရှိကြောင်းအကြံပြုသည်, အခြားသတင်းရပ်ကွက်များကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအိပ်ရေးဝြခင်းကိုကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာဖို့လည်းဘဝ (ဥပမာ, ဝါသနာ, အလုပျခှငျ, မိတ်ဆွေများ, မိသားစုစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းကဝိညာဉ်ရေးအုပ်စုနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုစတာတွေ) ၏အမျိုးမျိုးသော domains များအတွက် Self-တိုးချဲ့၏မျိုးစုံနှင့်ကွဲပြားခြားနားသတင်းရင်းမြစ်ရှိသည်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်နှင့်ခိုင်ခံ့သောလူမှုရေးကွန်ရက်များရှိသည် အရာတစျခု (ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့, ဥပမာအဖွဲ့ဟာ) လိုအပ်ချက်ကာလ၌ထောက်ခံမှုများအတွက်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးချဲ့တစ်ဦးကိုချက်ချင်း partner ၏ဆုံးရှုံးမှုပြီးနောက်အသစ်တခုလူတစ်ဦးနှင့်အတူမေတ္တာ၌လဲရှာကြံအလားအလာအန္တရာယ်များအပြုအမူတွေ (ဥပမာအကြောင်းကိုသတိနဲ့ကျန်းမာထုံးစံ၌ လိုက်. သင့်ကြောင်းသတိပြုပါရန်, သို့သော်အရေးကြီးသည်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အလေ့အကျင့်ကိုတက်ကောက်နေသို့မဟုတ် ) ဖြတ်တဲ့အခါမှာအခြားပစ္စည်းဥစ္စာတစ်ခုစှဲလမျးသူဖြစ်လာ။
အလားတူပင်အဲဒါကိုဆက်ဆံရေးနှင့်စှဲနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုတစ်ဦးချင်းစီကတခြား-တည်ရှိပူးတွဲနိုင်ပြီးကြောင့်စွဲလမ်း၏ပြဿနာများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခံရဖို့မလိုအပ်သည့်အခါတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့နှင့်အပြုသဘောရင်ခုန်စရာဆကျဆံရေးရှိအထူးသဖြင့်ခက်ခဲဖြစ်မည်အကြောင်းမှတ်မိဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ စွဲမကြာခဏလျော့နည်းဘို့အလိုဆန္ဒနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာဆုလာဘ်တုံ့ပြန်စေပါတယ်ကြောင့်လိုလားတဲ့ကြားဆက်ဆံရေးအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့စွဲနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်သူတို့အဘို့အထူးသဖြင့်ခက်ခဲဖြစ်နှင့်, အရှင်ငြင်းပယ်ခံရမှုအန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ရင်ခုန်စရာငြင်းပယ်ခံရဒီတော့ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုဆုတ်ခွာစဉ်ကရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးနီးစပ်အာရုံကိုအရေးကြီးသောဖြစ်စေခြင်းငှါ, relapse ၏အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေပါသည်။
ထို့အပြင်ပြုံး (အပျြောအပါး၏ခံစားချက်များကိုလှုံ့ဆော်နိုင်သောဦးနှောက်မှာရှိတဲ့အာရုံကြောလမ်းကြောင်းကိုသက်ဝင်ကြောင့်မျက်နှာကကြွက်သားတွေကိုအသုံးချCarter က, 1998) ။ အပြုသဘောအာရုံစိုက်လွန်းထိရောက်သောဖြစ်နိုင်သည်။ ကလေ့လာမှု Lewandowski (2009) သူတို့ကအနုတ်ခံစားချက်တွေကိုအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည်သို့မဟုတ်မည်သည့်ခံစားချက်များကိုဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲရေးသားခဲ့သည်သည့်အခါဆန့်ကျင်အဖြစ်လူတွေအပြုသဘောဆောင်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည်သည့်အခါတစ်ဦးမကြာသေးခင်ကကြားဆက်ဆံရေးချိုး-Up နှင့် ပတ်သက်. သုံးရက်ဆက်တိုက်အပေါ် 20 မိဘို့စာရေးအကျိုးရှိသောခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အရေးအပါဆုံး, အချိန်ပူးတွဲ system ကို attenuates ။ ပူးတွဲမှု၏ခံစားချက်များကိုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့ဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌ပယ်ချယောက်ျားမိန်းမတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာတော့ငြင်းပယ်ခံရကတည်းကကာလ၏အရေအတွက် သာ. ကြီးမြတ်သည်လျော့နည်းလုပ်ဆောင်မှုကို (ventral pallidum) (Fisher က et al ။ , 2010).
သုတေသီများရှည်လျားသော Non-ပစ္စည်းဥစ္စာထိုကဲ့သို့သောထိန်းအကွပ်မဲ့လောင်းကစားဝိုင်းအဖြစ်ဆုလာဘ်, အစာစားခြင်း, လိင်, လေ့ကျင့်ခန်း, အင်တာနက်အသုံးပြုမှုများ၏ compulsive လိုက်စားခြင်းရှိမရှိဆွေးနွေးတင်ပြကြ compulsive ဝယ်ရောဂါနှင့်အခြားစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးအပြုအမူ Syndrome (စှဲအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါသည်Frascella et al ။ , 2010; Rosenberg ကနှင့်ဖက်ဒရယ်, 2014) ။ အားလုံးဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုမှဘုံ salience, စွဲ, သည်းခံစိတ်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခို, ထုတ်ယူ, relapse နှင့်အခြားစရိုက်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်ဤ Non-ပစ္စည်းဥစ္စာဆုလာဘ်များစွာ (တွေ့မြင်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဆင်တူအကျိုးကိုစနစ်၏ dopamine လမ်းကြောင်းအတွက်တိကျတဲ့လှုပ်ရှားမှုထုတ်လုပ်ပြသပြီ Frascella et al ။ , 2010; မြင် Rosenberg ကနှင့်ဖက်ဒရယ်, 2014) ။ ဤသည် non-တ္ထုများ၏ထိန်းအကွပ်မဲ့အသုံးပြုမှုကိုစှဲထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ရိုမန်းတစ်မေတ္တာတော်ကိုတဦးတည်းချွင်းချက်နှင့်အတူ, အလားတူစွဲဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ အခြားအစှဲ (လူဦးရေကသာတစ်ရာခိုင်နှုန်းတစ်ဦး ffl ICT ကြောင်း) မတူဘဲ, မေတ္တာစွဲအချို့ကိုပုံစံယခုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အတိတ်တှငျနထေိုငျသောအလုနီးပါးတိုင်းလူ့ဖြစ်လျက်ရှိမှပေါ်ပေါက်နိုင်ဖွယ်ရှိ၏ အနည်းငယ်ဖြစ်စေရင်ခုန်စရာငြင်းပယ်ခံရ၏နာကျင်မှုမှရှောင်ရှား။
ရိုမန်းတစ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတစ်ဦးမှာသဘာဝစွဲဖြစ်ပေါ်လာသော "ပုံမှန်ပြောင်းလဲပြည်နယ်" လုနီးပါးလူသားအားလုံးအားဖြင့်တွေ့ကြုံ (Frascella et al ။ , 2010, p ။ ထိုသို့သောအားဖြင့်, မိတ်လိုက်အချိန်နှင့်စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းမှုမျိုးပွားစတင်, ပူးတွဲမှုနှင့်နောက်ဆက်တွဲနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်မိဘအုပ်ထိန်း၏ခံစားချက်များကိုထွက်လာပါတယ်, မိမိတို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန် DNA ကို၏အနာဂတ်အာမခံတိကျတဲ့မိတ်ဖက်အပေါ်သူတို့ရဲ့မိတ်လိုက်စွမ်းအင်အာရုံစိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးဘီဘင်ကလှုံ့ဆျောမှလူ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကာလအတွင်းပြောင်းလဲကြောင်း 295) (Fisher သည် 2004, 2011, 2016; Fisher က et al ။ , 2006) ။ ဆက်ဆံရေး, တုံ့ Non-အဆိပ်အတောက်များနှင့်သင့်လျော်သောအခါ romantic ချစ်ခြင်းမေတ္တာတစ်ဦးအပြုသဘောစွဲဖြစ်နိုင်သည်; သို့သော်အန္တရာယ်, အနုတ်လက္ခဏာစွဲအခါ, unreciprocated အဆိပ်သင့်, မသင့်လျော်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်တရားဝင်ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာစွဲ၏အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာတွေသက်သာစေရန်, စွဲချစ်သူများပန်ကာ၎င်းတို့၏ဒေါသမီး, တစ်ဦး 12-ခြေလှမ်းအစီအစဉ်၏အချို့သောအကြံပေးချက်များကိုလိုက်နာသစ်ကိုနေ့စဉ်အလေ့အကျင့်ကိုတည်ဆောက်အသစ်ကလူတွေ့ဆုံရန်အသစ်အကျိုးစီးပွားတက်ယူ, သင့်လျော်သောဆေးကိုရှာဖွေသောတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အကြံပေးကြသည် နှင့် / သို့မဟုတ်ကုထုံးနှင့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဟောင်းတစ်ဦးရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်ကျဆင်းခြင်းမှပူးတွဲမှု၏ခံစားချက်များကို (, ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းတှေးအချေါနှငျ့တဏှာလကျထကျနဲ့ညထဲကအစောင့်ဆိုင်းFisher က et al ။ , 2010) ။ ထိုမှတပါး, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချဲ့ထွင်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတဦးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သို့အသစ်ကတစ်ဦးချင်းစီထည့်သွင်းကြောင်းကုထုံးကိုလည်းလျော့ကျမေတ္တာတော်ကိုစွဲလမ်းအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည်။ ကိုယ်ပိုင်တိုးချဲ့ချဉ်းကပ်မှုကိုလည်းမူးယစ်ဆေးနှင့်အခြားအနုတ်လက္ခဏာစွဲကုထုံးကိုကူညီလိမ့်မည်။
အများပြည်သူနှင့်ကုထုံး, ဆေးဝါးနှင့်ဥပဒေရေးရာအသိုင်းအဝိုင်းအသည်းအသန်အစောပိုင်းအဆင့်ရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာတစ်ဦးပြောင်းလဲ drive ကို (ကြောင်းကိုနားလည်ရန်လာလျှင်Fisher သည် 2004) နှင့်သဘာဝစွဲ (Frascella et al ။ , 2010) လေးနက်, လူမှုရေး, စီးပွားရေး, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အကျိုးရှိသောနှင့်ဆိုးရွားသောနှစ်ဦးစလုံးမျိုးရိုးဗီဇအကျိုးဆက်များ () ရှိနိုငျကွောငျး, Clinician နှင့်သုတေသီများအိမ်ထောင်ဖက် preference ကိုများနှင့်ကနဦးမိတ်ဖက်ပူးတွဲမှု, ရင်ခုန်စရာစျြခွငျးမတ်ေတာအတှကျဤအစွမ်းထက်နှင့်ကမ္ဘာအာရုံကြောယန္တရားနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ပိုမိုထိရောက်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပေလိမ့်မည်။
HF ယခင်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်သူမ၏စိတ်ကူးများနှင့်အချက်အလက်ပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဝက်စာသားရေးသားခဲ့သည်များနှင့်နောက်ဆုံးဗားရှင်း edited ။ XX သည်ယခင်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်သူမ၏စိတ်ကူးများနှင့်အချက်အလက်ပေါ်အခြေခံပြီးစာသားနှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကရေးသားခဲ့သည်။ AA ကိုမိမိအစိတ်ကူးများနှင့်ယခင်လေ့လာမှုများအပေါ်အခြေခံပြီးစာသားမှလှူဒါန်းခဲ့သည်။ LB ယခင်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်သူမ၏စိတ်ကူးများနှင့်အချက်အလက်ပေါ်အခြေခံပြီးစာသား၏သုံးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရေးသားခဲ့သည်များနှင့်နောက်ဆုံးဗားရှင်း edited ။
Acevedo, ခ, Aron, အေ, Fisher သည်အိပ်ချ်နှင့်ဘရောင်း, အယ်လ် (2011) ။ အာရုံကြောရေရှည်ပြင်းထန်သောရင်ခုန်စရာမတ်ေတာ၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ Soc ။ Cogn ။ အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ neuroscience ။ 7, 145-159 ။ Doi: 10.1093 / စကင် / nsq092
Agnew, CR, ဗန် Lang, Pam, Rusbult, အီးများနှင့် Langston,, CA (1998) ။ သိမှုအလှနျမှီခို: ကတိကဝတ်များနှင့်အနီးကပ်ဆက်ဆံရေးများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်စားပြုမှု။ ဂျေ Pers ။ Soc ။ Psychol ။ 74, 939-954 ။ Doi: 10.1037 / 0022-3514.74.4.939
Ainsworth, MDS, Blehar, MC, ရေ, အီးများနှင့်အမှတ်တရ, SN (1978) ။ နှောင်ကြိုးများကိုပုံစံများ: အထူးဆန်းအခြေအနေတစ်စိတ်ဓာတ်လေ့လာပါ။ Hillsdale, NJ: Erlbaum ။
ALTER, RJ, Lohrmann, DK နှင့်ဂရင်း, R. (2006) ။ အရက်များအတွက်ဆေးခြောက်လူစားထိုး: ရိပ်မိလက်လှမ်းနှင့်ထိခိုက်မှု၏အခန်းကဏ္ဍကို။ ဂျေမူးယစ်ဆေး။ Education ။ 26, 335–355. doi: 10.2190/2780-G96W-J17N-R3H1
အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း (2013) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်, 5th Edn ။ Arlington, VA သို့: အမေရိကန်စိတ်ရောဂါထုတ်ဝေရေး။
Aron, အေနှင့် Aron, အီး (1986) ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ကိုယ်ပိုင်များ၏ချဲ့: နားလည်မှုဆွဲဆောင်ကျေနပ်မှု။ နယူးယောက်, NY: ခြမ်း။
Aron, အေ, Aron, မာခ်နှင့် Smollan, ဃ (1992) ။ ကိုယ်ပိုင်စကေးရှိအခြားများ၏ပါဝင်မှုနှင့်လူ့ရငျးနှီးမှုများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ။ ဂျေ Pers ။ Soc ။ Psychol ။ 63, 596-612 ။ Doi: 10.1037 / 0022-3514.63.4.596
Aron, အေ, Aron, မာခ်, ရေရှိဖို့, အမ်နှင့်နယ်လ်ဆင်, G. အ (1991) ။ ကိုယ်ပိုင်တခြားအပါအဝင်အဖြစ်အနီးကပ်ဆက်ဆံရေး။ ဂျေ Pers ။ Soc ။ Psychol ။ 60, 241-253 ။ Doi: 10.1037 / 0022-3514.60.2.241
Aron, အေ, Fisher သည် HE, Mashek, DJ သမား, ခိုင်ခံ့, G. အလီ, HF နှင့်ဘရောင်း, ll (2005) ။ တစ်ဦး fMRI လေ့လာမှု: အစောပိုင်းအဆင့်ပြင်းထန်သောရင်ခုန်စရာမေတ္တာနှင့်ဆက်စပ်ဆုလာဘ်, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစနစ်များကို။ ဂျေ Neurophysiol ။ 94, 327-337 ။ Doi: 10.1152 / jn.00838.2004
Aron, အေ, Lewandowski, G. အ, Mashek, ဃ, နှင့် Aron, မာခ် (2013) ။ "အနီးကပ်ဆက်ဆံရေးအတွက်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အခြားသောကောင်းကျိုး၏ Self-တိုးချဲ့မော်ဒယ်," အတွက် ပိတ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၏အောက်စဖို့လက်စွဲစာအုပ်, eds ဂျေအေ Simpson နှင့်အယ်လ်ကမ့်ဘဲလ် (နယူးယောက်: အောက်စ်ဖို့), 90-115 ။
Aron, အေ,-Norman, CC ကို, Aron, မာခ်, McKenna, C တို့နှင့် Heyman, R. (2000) ။ စုံတွဲများဝတ္ထုနှင့်နှိုးဆွသောလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတွေ့အကြုံရကြားဆက်ဆံရေးအရည်အသွေးပါဝင်မှု shared ။ ဂျေ Pers ။ Soc ။ Psychol ။ 78, 273-283 ။ Doi: 10.1037 / 0022-3514.78.2.273
Aron, အေ, ပဲရစ်, အမ်နှင့် Aron, မာခ် (1995) ။ မေတ္တာ၌ကျသွား: Self-အယူအဆပြောင်းလဲမှုအလားအလာလေ့လာမှုများ။ ဂျေ Pers ။ Soc ။ Psychol ။ 69, 1102-1112 ။ Doi: 10.1037 / 0022-3514.69.6.1102
Aron, AP, Mashek, DJ သမားနှင့် Aron, မာခ် (2004) ။ "ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအခြားအပါအဝင်အဖြစ်ကိုပိတ်ပါ," တွင် Close နှင့်နီးစပ်၏လက်စွဲစာအုပ်, eds ဃ Mashek နှင့်အေ Aron (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates မှ), 27-41 ။
Bartels, အေနှင့် Zeki, အက်စ် (2000) ။ ရင်ခုန်စရာစျြခွငျးမတ်ေတာ၏အာရုံကြောအခြေခံ။ Neuro အစီရင်ခံစာ။ 11, 3829–3834. doi: 10.1097/00001756-200011270-00046
Bartels, အေနှင့် Zeki, အက်စ် (2004) ။ မိခင်နှင့်ရင်ခုန်စရာစျြခွငျးမတ်ေတာ၏အာရုံကြောဆက်စပ်။ Neuroimage 21, 1155-1166 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroimage.2003.11.003
Baumeister, RF, Wotman, SR နှင့် Stillwell, Am (1993) ။ တစ်ဖက်သက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ: ကြေကွဲဖွယ်, အမျက်ဒေါသအပြစ်ရှိတယ် scriptlessness နှင့်အရှက်ပေါ်မှာ။ ဂျေ Pers ။ Soc ။ Psychol ။ 64, 377-394 ။ Doi: 10.1037 / 0022-3514.64.3.377
Berridge, KC, ရော်ဘင်ဆင်, TE နှင့် Aldridge, JW (2009) ။ '' Like ',' လို 'နှင့်သင်ယူမှု: ဆုလာဘ်၏အစိတ်အပိုင်းများချက်ကိုပိုင်းခြားစိတ်ဖြာ။ Curr ။ Opin ။ Pharmacol ။ 9, 65-73 ။ Doi: 10.1016 / j.coph.2008.12.014
Bickel, wk, ဂျွန်ဆင်, မဂ္ဂါဝပ်, Koffarnus, MN, MacKillop, ဂျေ, နှင့်မာဖီ, JG (2014) ။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်များ၏အမူအကျင့်ဘောဂဗေဒ: အားဖြည့်ရောဂါဗေဒနှင့်၎င်းတို့၏ပြုပြင်။ Annu ။ ဗျာ Clin ။ Psychol ။ 10, 641-677 ။ Doi: 10.1146 / annurev-clinpsy-032813-153724
Bowlby, ဂျေ (1969) ။ attachment နဲ့ဆုံးရှုံးမှု: Vol ။ 1 နှောင်ကြိုး။ နယူးယောက်: အခြေခံပညာစာအုပ်များ။
Bowlby, ဂျေ (1973) ။ attachment နဲ့ဆုံးရှုံးမှု: Vol ။2။ ခွဲခြာ။ နယူးယောက်: အခြေခံပညာစာအုပ်များ။
Breiter, HC, အာရုန်, ဗြဲ, Kahneman, ဃ, Dale ကအေနှင့် Shizgal, P. (2001) ။ ငွေကြေးဆိုင်ရာအကျိုးအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုများမျှော်မှန်းခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု၏ functional ပုံရိပ်။ အာရုံခံဆဲလျ 30, 619–639. doi: 10.1016/S0896-6273(01)00303-8
Breiter, HC, Gollub, RL, Weisskoff, RM, ကနေဒီ, DN, Makris, N. , Berke, JD, et al ။ (1997) ။ လူ့ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ကိုကင်း၏ acute ဆိုးကျိုးများ။ အာရုံခံဆဲလျ 19, 591–611. doi: 10.1016/S0896-6273(00)80374-8
Burkett, JP နှင့်လူငယ်တို့, LJ (2012) ။ လူမှုရေးပူးတွဲမှု, မေတ္တာနှင့်စွဲလမ်းအကြား, အမူအကျင့်ခန္ဓာဗေဒနှင့် pharmacological မျဉ်းပြိုင်။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 224, 1–26. doi: 10.1007/s00213-012-2794-x
Carter က, R. (1998) ။ စိတျပုံဖော်။ Los Angeles မြို့,, CA: ကယ်လီဖိုးနီးယားစာနယ်ဇင်းတက္ကသိုလ်။
Cherlin, AJ (2009) ။ အဆိုပါအိမ်ထောင်ရေး-Go-က Round: အိမ်ထောင်ရေး၏ပြည်နယ်နှင့်အမေရိကရှိမိသားစုယနေ့။ နယူးယောက်: အဲဖရက်အေ Knopf ။
Cuzen, NL နှင့် Stein, DJ သမား (2014) ။ "အပြုအမူစွဲ: Impulse နှင့် compulsive ၏ Nexus" အတွက် အမူအကျင့်စွဲစေ: လိုအပ်ချက်, အထောက်အထားနှင့်ကုသရေး, eds KR Rosenberg ကနှင့် LC အဖွဲ့ချုပ် (လန်ဒန်: Elsevier), 19-34 ။
Daly, အမ်နှင့် Wilson က, အမ် (1983) ။ လိင်, ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်အပြုအမူ, Edn 2nd ။ ဘော်စတွန်: ဝီ Grant က။
Delgado, MR, Nystrom, LE, Fissel, C တို့, Noll, DC ကများနှင့် Fiez ဂျေအေ (2000) ။ အဆိုပါ striatum အတွက်ဆုချခြင်းနှင့်ပြစ်ဒဏ်ပေးရန် hemodynamic တုံ့ပြန်မှုခြေရာခံ။ ဂျေ Neurophysiol ။ 84, 3072-3077 ။
ဒိုင်ယာနာ, အမ် (2013) ။ အဆိုပါစွဲဦးနှောက်။ တပ်ဦး။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 4: 40 ။ Doi: 10.3389 / fpsyt.2013.00040
Dietrich, အေနှင့် McDaniel, WF (2004) ။ Endocannabinoids နှင့်လေ့ကျင့်ခန်း။ br ။ ဂျေအားကစား။ Med ။ 38, 536-541 ။ Doi: 10.1136 / bjsm.2004.011718
DiNardo, ဂျေနှင့် Lemieux, တီ (2001) ။ အရက်, ဆေးခြောက်နှင့်အမေရိကန်လူငယ်: အစိုးရစည်းမျဉ်းများမရည်ရွယ်သောအကျိုးဆက်များ။ ဂျေကနျြးမာရေး။ Econ ။ 5, 991–1010. doi: 10.1016/S0167-6296(01)00102-3
ဒိုနိုဗန်, JM (1988) ။ "relapse ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အစွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏အကဲဖြတ်," အတွက် ကိုစှဲအပြုအမူ၏အကဲဖြတ်, eds DM ဒိုနိုဗန်နှင့် GA Marlatt (နယူးယောက်: Guilford), 3-48 ။
Dozier, RW (2002) ။ အဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့မုန်းတယ်: နားလည်မှုလုပ်ရပ်များထိန်းချုပ်တားဆီးရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာ့အမုန်းဖျက်သိမ်းရေး။ နယူးယောက်: ခေတ်ပြိုင်စာအုပ်တွေ။
Eisenberger, Ni, Lieberman, MD နှင့်ဝီလျံ, KD (2003) ။ ပယ်ချမကောင်းပါသလား? လူမှုရေးဖယ်ထားတဲ့ FMRI လေ့လာမှု။ သိပ္ပံ 302, 290-292 ။ Doi: 10.1126 / science.1089134
Elliott သည်, R. , Newman က, JL, Long, oa နှင့် Deakin, JFW (2003) ။ လူသားတွေအတွက်ဘဏ္ဍာရေးဆုလာဘ်ပေးရန် striatum နှင့် orbitofrontal cortex အတွက် differential တုံ့ပြန်မှုပုံစံများ: တစ် parametric အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ ဂျေ neuroscience ။ 23, 303-307 ။
Fabre-Nys, C တို့, Ohkura, အက်စ်နှင့် Kendrick, KM (1997) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသို့တစ်ခုထိုးထွင်းသိမြင်: အထီးမျက်နှာများနှင့်အနံ့ estrus စဉ်အတွင်းသိုးများ၏ mediobasal hypothalamus အတွက် neurochemical လွှတ်ပေးရေး differential ကိုပုံစံများကျလာသော။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 9, 1666–1677. doi: 10.1111/j.1460-9568.1997.tb01524.x
Fisher သည်အိပ်ချ်, Aron, အေနှင့်ဘရောင်း, ll (2005) ။ ရိုမန်းတစ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ: အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်မှုများအတွက်အာရုံကြောယန္တရားတစ်ခု MRI လေ့လာမှု။ ဂျေ comp ။ Neurol ။ 493, 58-62 ။ Doi: 10.1002 / cne.20772
Fisher သည်အိပ်ချ်, Aron, အေနှင့်ဘရောင်း, ll (2006) ။ ရိုမန်းတစ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ: အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်မှုများအတွက်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေဟာဦးနှောက်စနစ်။ ဖီလို။ ဖြတ်ကျော်။ R. Soc ။ Lond ။ ခ Biol ။ သိပ္ပံ။ 361, 2173-2186 ။ Doi: 10.1098 / rstb.2006.1938
Fisher သည်အိပ်ချ်, Aron, အေ, Mashek, ဃ, ခိုင်ခံ့, G. အလီ, အိပ်ချ်, နှင့်ဘရောင်း, ll (2002) ။ တပ်မက်သောစိတ်, ရင်ခုန်စရာဆွဲဆောင်မှုများနှင့်ပူးတွဲမှု၏ဦးနှောက်စနစ်များ defining ။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 31, 13-19 ။ Doi: 10.1023 / A: 1019888024255
Fisher သည်အိပ်ချ်, Aron, အေ, Mashek, ဃ, ခိုင်ခံ့, G. အလီအိပ်ချ်နှင့်ဘရောင်း ll (2003) ။ အစောပိုင်းအဆင့်တွင်ပြင်းထန်သောရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာ cortical-Basal-ganglia ဆုလာဘ် / လှုံ့ဆျောမှု, စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုစနစ်များကိုမြှင့်လုပ်ဆောင်: ဆက်ဆံရေးဟာအရှည်, စိတ်အားထက်သန်မှုပြင်းထန်မှုနှင့်ကျား, မအတူကွဲပြားတဲ့ပြောင်းလဲနေသောကွန်ယက်တစ်ခု fMRI လေ့လာမှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံများအတွက် Society ၏နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင်တင်ပြပိုစတာ, New Orleans ။
Fisher သည်သူ (1989) ။ လူ့အမှတ်စဉ် pair တစုံ-ဘွန်း၏ဆင့်ကဲ။ နံနက်။ ဂျေ Phys ။ Anthropol ။ 78, 331-354 ။ Doi: 10.1002 / ajpa.1330780303
Fisher သည်သူ (1992) ။ မေတ္တာခန္ဓာဗေဒ: စျမယား, မတရားသောမေထုန်၏သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်နှင့်ကွာရှင်း။ နယူးယောက်, NY: WW က Norton ။
Fisher သည်သူ (1998) ။ တပ်မက်သောစိတ်, ဆွဲငင်မှု, နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးပွါးအတွက်ပူးတွဲမှု။ Hum ။ နတ်။ 9, 23–52. doi: 10.1007/s12110-998-1010-5
Fisher သည်သူ (2004) ။ ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့် Love: Romantic မတ်ေတာသ၏သဘာဝနှင့်ဓာတုဗေဒ။ နယူးယောက်: ဟင်နရီ Holt ။
Fisher သည်သူ (2011) ။ "Serial စျမယားနှင့်လျှို့ဝှက်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်: ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့် dual-လူ့မျိုးဆက်ပွားမဟာဗျူဟာ၏အကျိုးဆက်များ" အတွက် အသုံးချဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်စိတ်ပညာ, ed ။ SC ရောဘတ် (နယူးယောက်, NY: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း), 96-111 ။
Fisher သည်သူ (2016) ။ မေတ္တာခန္ဓာဗေဒ: အိမ်ထောင်ဖက်တစ်ဦးသဘာဝသမိုင်းပြတိုက်, အိမ်ထောင်ရေးနှင့်ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်လမျးလှဲသှား, Edn 2nd ။ နယူးယောက်: WW က Norton ။
Fisher ကသူဘရောင်း, ll, Aron, အေ, ခိုင်ခံ့, G. အများနှင့် Mashek, ဃ (2010) ။ မေတ္တာ၌ငြင်းပယ်ခံရနှင့်ဆက်စပ်ဆုလာဘ်, စွဲလမ်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းစနစ်များကို။ ဂျေ Neurophysiol ။ 104, 51-60 ။ Doi: 10.1152 / jn.00784.2009
ဖလက်ချာ, GJO, Simpson, ဂျာကမ့်ဘဲလ်, အယ်လ်, နှင့်ယေဘုယျအား, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား (2015) ။ Pair ကို Bond, ရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်း, ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်: Homo Sapiens ၏စပ်စုကိစ္စတွင်။ ရှုထောင့်။ Psychol ။ သိပ္ပံ။ 10, 20-36 ။ Doi: 10.1177 / 1745691614561683
Fraley, RC နှင့်မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်, PR စနစ် (2000) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူရင်ခုန်စရာပူးတွဲဖိုင်ကို: သီအိုရီဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု, ထွန်းသစ်စအငြင်းပွားစရာများနှင့်အဖြေမရတဲ့မေးခွန်းတွေ။ ဗျာဗိုလ်ချုပ်ကြီး Psychol ။ 4, 132-154 ။ Doi: 10.1037 // 1089-2680.4.2.132
Frascella, ဂျေ, Potenza, MN, ဘရောင်း, ll နှင့် Childress, AR (2010) ။ shared ဦးနှောက်အားနည်းချက်များ nonsubstance စှဲများအတွက်လမ်းဖွင့်: သစ်တစ်ခုပူးတွဲမှာစွဲလြှော့အရှုံးပေး? အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 1187, 294-315 ။ Doi: 10.1111 / j.1749-6632.2009.05420.x
Frayser, အက်စ် (1985) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုး: လူ့လိင်၏ Anthropological အမြင်။ နယူး: HRAF နှိပ်ပါ။
Gingrich, ခ, လျူ, Y. , Cascio, CZ နှင့် Insel, TR (2000) ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် Dopamine D2 receptors (အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လူမှုရေးပူးတွဲမှုများအတွက်အရေးကြီးပါသည်Microtus ochrogaster). ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 114, 173-183 ။ Doi: 10.1037 / 0735-7044.114.1.173
Goldfarb တို့, AH နှင့် Jamurtas, AZ (1997) ။ လေ့ကျင့်ခန်းမှ beta-နဲ့အတူ Endorphins တုံ့ပြန်မှု။ တစ်ခု update ကို။ အားကစား။ Med ။ 24, 8–16. doi: 10.2165/00007256-199724010-00002
Griffin-Shelley, အီး (1991) ။ လိင်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ: စွဲ, ကုသမှုနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး။ Westport, မှန် CT: Praeger ။
Halpern, HM (1982) ။ တစ်ဦးကို Person ရန်သင့်စွဲမှုကိုချိုးဖို့ကိုဘယ်လို။ နယူးယောက်: McGraw-Hill က။
Haney, အမ် (2009) ။ အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ထောငျခြော: လူ့ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာကိုကင်း, ဆေးခြောက်နှင့်သူရဲကောင်း၏ self-အုပ်ချုပ်မှု။ စှဲလမျးသူ။ Biol ။ 14, 9-21 ။ Doi: 10.1111 / j.1369-1600.2008.00121.x
Hänninen, V. နှင့် Koski-ယန္နေ, အေ (1999) ။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေကနေပြန်လည်နာလန်ထူ၏ဇာတ်လမ်းများ။ စှဲမွဲမှု 94, 1837-1848 ။ Doi: 10.1046 / j.1360-0443.1999.941218379.x
Harris က, အိပ်ချ် (1995) ။ "ပိုလီနီးရှားမှာရှိတဲ့လိင်ကွဲဆက်ဆံရေး Rethinking: mangaia တစ်ဦးအမှုလေ့လာမှု, ကျွန်းချက်ပြုတ်," အတွက် ရိုမန်းတစ်စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြ: တစ်ဦးက Universal အတွေ့အကြုံ?, ed ။ ဒဗလျူ Jankowiak (နယူးယောက်, NY: ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်စာနယ်ဇင်း), 95-127 ။
Hatfield, အီးများနှင့် Sprecher, အက်စ် (1986) ။ ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးအတွက်အသည်းအသန်မေတ္တာတော်ကိုတိုင်းတာခြင်း။ ဂျေမြီးကောင်ပေါက်။ 9, 383–410. doi: 10.1016/S0140-1971(86)80043-4
Haylett, SA, Stephenson က, GM ကများနှင့် Lefever, RMH (2004) ။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေအတွက် Covariation: အအရပ်ပုသည့် PROMIS မေးခွန်းလွှာသုံးပြီးစွဲလမ်းလမ်းကြောင်းမတူညီ၏လေ့လာမှုတစ်ခု။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 29, 61–71. doi: 10.1016/S0306-4603(03)00083-2
Hazan, C တို့နှင့်စိန်, LM (2000) ။ လူ့မိတ်လိုက်များတွင်ပူးတွဲမှုရာအရပ်။ ဗျာဗိုလ်ချုပ်ကြီး Psychol ။ 4, 186-204 ။ Doi: 10.1037 // 1089-2680.4.2.186
Hazan, C တို့နှင့်မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်, PR စနစ် (1987) ။ ရိုမန်းတစ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတစ်ဦးကို attachment ဖြစ်စဉ်ကိုအဖြစ် conceptualized ။ ဂျေ Pers ။ Soc ။ Psychol ။ 52, 511-524 ။ Doi: 10.1037 / 0022-3514.52.3.511
Hoeft, အက်ဖ်, Watson, CL, Kesler, SR, Betting, Ke နှင့် Reiss, AL (2008) ။ ကွန်ပျူတာဂိမ်း-ကစားနေစဉ်အတွင်း mesocorticolimbic စနစ်ကျားကွဲပြားခြားနားမှု။ ဂျေ Psychiatric ။ res ။ 42, 253-258 ။ Doi: 10.1016 / j.jpsychires.2007.11.010
မုဆိုး, MS, Nitschke, C တို့နှင့် Hogan, အယ်လ် (1981) ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာစွဲတိုင်းတာရန်တစ်ဦးကစကေး။ Psychol ။ အစီရင်ခံစာများ 48, 582 ။ Doi: 10.2466 / pr0.1981.48.2.582
Insel, TR (2003) ။ လူမှုရေးပူးတွဲမှုတစ်ခုစွဲလမ်းဖရိုဖရဲဖြစ်သနည်း Physiol ။ ပြုမူနေ။ 79, 351–357. doi: 10.1016/S0031-9384(03)00148-3
Insel, TR နှင့်လူငယ်တို့, LJ (2001) ။ ပူးတွဲမှု၏ neurobiology ။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ 2, 129-136 ။ Doi: 10.1038 / 35053579
ယော်ဒန်မြစ်, HW နှင့် Howe, G. အ (1980) ။ ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်အမှုတင်ဆက်မှု: de syndrome ရောဂါ (Erotomania) clerambault ။ ဂျေ Natl ။ Med ။ Assoc ။ 72, 979-985 ။
Kellogg, SH နှင့် Kreek, MJ (2005) ။ တဖြည်းဖြည်း, ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ, စစ်ကူများနှင့်ပြောင်းလဲမှု။ int ။ ဂျေမူးယစ်ဆေးပေါ်လစီ 16, 369-375 ။ Doi: 10.1016 / j.drugpo.2005.08.001
Knutson, ခ, Rick, အက်စ်, Wimmer, GE, Prelec, ဃ, နှင့် Loewenstein, G. အ (2007) ။ ဝယ်ယူမှု၏သဘာဝခန့်မှန်း။ အာရုံခံဆဲလျ 53, 147-156 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2006.11.010
Kolata, G. အ (2002) ။ Runner ရဲ့အမြင့်? နဲ့အတူ Endorphins? ထူးအိမ်သင်အချို့သောသိပ္ပံပညာရှင်ပြောကြပါတယ်။ သိပ္ပံ။ Times သတင်းစာ 21, F1-F6 ။
Koob, gf နှင့် Volkow, ND (2010) ။ စွဲလမ်း၏ Neurocircuitry ။ Neuropsychopharmacology 35, 217-238 ။ Doi: 10.1038 / npp.2009.110
Kopelman, MD Guinan, EM နှင့် Lewis က, PDR (2008) ။ လှညျ့မှတ်ဉာဏ်, confabulation နှင့်တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးကမောက်ကမဖြစ်မှု: De Clerambault ရဲ့ Syndrome တစ်ဦးအမှုလေ့လာမှု။ Neurocase 1, 71-77 ။ Doi: 10.1080 / 13554799508402348
Leary, MR (2001) ။ Interpersonal ပယ်ချ။ နယူးယောက်, NY: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်နှိပ်ပါ။
Lewandowski, GW ဂျူနီယာ (2009) ။ စာအရေးအသားမှတဆင့်ဆက်ဆံရေးဟာဖျက်သိမ်းအောက်ပါအပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုမြှင့်တင်ရန်။ ဂျေ POS ။ Psychol ။ 4, 21-31 ။ Doi: 10.1080 / 17439760802068480
Lewandowski, GW ဂျူနီယာနှင့် Bizzoco, N. (2007) ။ အနုတ်တဆင့်ဖြည့်စွက်: တစ်အရည်အသွေးနိမ့်ဆက်ဆံရေး၏ဖျက်သိမ်းအောက်ပါတိုးတက်မှုနှုန်း။ ဂျေ POS ။ Psychol ။ 2, 40-54 ။ Doi: 10.1080 / 17439760601069234
Lewis က, တီ, Amini, အက်ဖ်နှင့် Lannon, R. (2000) ။ မေတ္တာတစ်ဦးကအထွေထွေသီအိုရီ။ နယူးယောက်, NY: ကျပန်းအိမ်။
Liebowitz, MR (1983) ။ မတ်ေတာ၏ဓာတုဗေဒ။ ဘော်စတွန်: Little ကဘရောင်း။
လျူ, Y. , လူငယ်, ka, Curtis, JT, Aragona, BJ နှင့်ဝမ်, Z. (2011) ။ လူမှု Bond တစ်ဦး dopamine D1 အဲဒီ receptor-mediated ယန္တရားမှတဆင့်စိတ်ကြွဆေး၏အကျိုးဂုဏ်သတ္တိများလျော့နည်းစေပါသည်။ ဂျေ neuroscience ။ 31, 7960-7966 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.1006-11.2011
Lovejoy, OC (2009) ။ ၏အလငျး၌လူ့ဇစ်မြစ် Reexamining Ardipithecus ramidus. သိပ္ပံ 326, 74-78 ။ Doi: 10.1126 / science.1175834
Macdonald, G. အများနှင့် Leary, MR (2005) ။ အဘယ်ကြောင့်လူမှုရေးဖယ်ထိခိုက်စေသနည်း? လူမှုရေးနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုအကြားဆက်ဆံရေး။ Psychol ။ နွားလား။ 131, 202-223 ။ Doi: 10.1037 / 0033-2909.131.2.202
Marazziti, ဃ, Akiskal, HS, ရော့စီ, အေနှင့် Cassano, GB ကို (1999) ။ ရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက် platelet serotonin ပို့ဆောင်ရေးအပြောင်းအလဲတချို့။ Psychol ။ Med ။ 29, 741-745 ။ Doi: 10.1017 / S0033291798007946
Marks, ဗြဲ (1990) ။ အမူအကျင့် (Non-ဓာတု) စွဲလမ်း။ br ။ ဂျေစွဲ။ 85, 1389–1394. doi: 10.1111/j.1360-0443.1990.tb01618.x
Mattingly, BA, McIntyre, KP နှင့် Lewandowski, GW ဂျူနီယာ (2012) ။ ချဉ်းကပ်မှုလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အနီးကပ်ဆက်ဆံရေးအတွက်မိမိကိုယ်မိမိ၏တိုးချဲ့။ Pers ။ rel ။ 19, 113-127 ။ Doi: 10.1111 / j.1475-6811.2010.01343.x
Melis, အမ်, Spiga, အက်စ်နှင့်ဒိုင်ယာနာ, အမ် (2005) ။ မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း၏ dopamine အယူအဆ: hypodopaminergic ပြည်နယ်။ int ။ ဗျာ Neurobiol ။ 63, 101–154. doi: 10.1016/S0074-7742(05)63005-X
Mellody, P. , Miller က AW နှင့် Miller က JK (1992) ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်စွဲလမ်းရင်ဆိုင်ခြင်း။ နယူးယောက်, NY: Harper ကို Collins ကထုတ်ဝေ။
Meloy, JR (1998) ။ အညှာ၏စိတ်ပညာ: လက်တွေ့နှင့်ဥပဒေရေးရာပတ်သ က်. ။ နယူးယောက်, NY: ပညာရေးဆိုင်ရာနှိပ်ပါ။
Meloy, JR, နှင့် Fisher, HE (2005) ။ ရိုးတံ၏အဆိုပါ neurobiology အပေါ်တချို့ကအတှေး။ Forensic ဂျေ။ သိပ္ပံ။ 50, 1472-1480 ။ Doi: 10.1520 / JFS2004508
et al ဂူ, PR စနစ်, လူယာ, SM, Baldwin, PR စနစ်, Phillips က, PE, Budygin, EA ၏, Stuber, GD ။ (2004) ။ လွတ်လပ်စွာတိရိစ္ဆာန်များရွေ့လျားအတွက် dopamine ပေးပို့၏ dynamic အမြတ်ထိန်းချုပ်မှု။ ဂျေ neuroscience ။ 24, 1754-1759 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.4279-03.2004
Noriuchi, အမ်, Kikuchi, Y. နှင့် Senoo, အေ (2008) ။ မိခင်မေတ္တာအလုပ်လုပ်တဲ့ neuroanatomy: မွေးကင်းစကလေးရဲ့ပူးတွဲဖိုင်ကိုအပြုအမူတွေမှမိခင်ရဲ့တုံ့ပြန်မှု။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 63, 415-423 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2007.05.018
Ortigue, အက်စ်, Bianchi-Demicheli, အက်ဖ်, Hamilton က, AF နှင့် Grafton, ST (2007) ။ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု-related အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု: တစ် subliminal ချုပ်အဖြစ်စျြခွငျးမတ်ေတာ၏အာရုံကြောအခြေခံ။ ဂျေ Cogn ။ neuroscience ။ 19, 1218-1230 ။ Doi: 10.1162 / jocn.2007.19.7.1218
Panksepp, ဂျေ (2003a) ။ ထိုအကျိုးသက်ရောက်စေ၏ interface ကို, အမူအကျင့်များနှင့်သိမြင်မှု neuroscience at: ဦးနှောက်၏စိတ်ခံစားမှုခံစားချက်တွေကိုကုဒ်ဖြုတ်။ ဦးနှောက် Cogn ။ 52, 4–14. doi: 10.1016/S0278-2626(03)00003-4
Panksepp, ဂျေ (2003b) ။ neuroscience ။ လူမှုရေးဆုံးရှုံးမှုနာကျင်မှု Feeling ။ သိပ္ပံ 302, 237-239 ။ Doi: 10.1126 / science.1091062
Panksepp, ဂျေ, Knutson, ခနှင့် Burgdorf, ဂျေ (2002) ။ စှဲအတွက်ဦးနှောက်စိတ်ခံစားမှုစနစ်များ၏အခန်းကဏ္ဍ: တစ် neuro-ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်သစ် '' Self-အစီရင်ခံစာ '' တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်။ စှဲမွဲမှု 97, 459-469 ။ Doi: 10.1046 / j.1360-0443.2002.00025.x
Peel, အက်စ် (1975) ။ မေတ္တာနှင့်စွဲလမ်းမှု။ နယူးယောက်, NY: Taplinger Publishing Company ကို။
Reno, PL, Meindl, RS, McCollum, MA နှင့် Lovejoy, CO (2003) ။ Australopithecus afarensis အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphism ခေတ်သစ်လူသား၏တူညီခဲ့သည်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 100, 9404-9409 ။ Doi: 10.1073 / pnas.1133180100
Reynaud, ML, Karila, အယ်လ်, Blecha, အယ်လ်, နှင့် Benyamina, အေ (2010) ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာစိတ်အားထက်သန်မှုတစ်ခုစွဲလမ်းဖရိုဖရဲဖြစ်သနည်း နံနက်။ ဂျေမူးယစ်ဆေးအရက်။ အလွဲသုံးစားမှု 36, 261-267 ။ Doi: 10.3109 / 00952990.2010.495183
ရော်ဘင်ဆင်, DL, Heien, ML နှင့် Wightman, RM (2002) ။ dopamine အာရုံစူးစိုက်မှုယာယီ၏ frequency dorsal နှင့် conspecifics ၏နိဒါန်းစဉ်အတွင်းအထီးကြွက်၏ ventral striatum အတွက်တိုးပွားစေပါသည်။ ဂျေ neuroscience ။ 22, 10477-10486 ။
Rosenberg က, KP နှင့်ဖက်ဒရယ်, LC (2014) ။ အတွက်: ", အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုမျှော်" လိုအပ်ချက်, အထောက်အထားနှင့်ကုသရေး, eds KR Rosenberg ကနှင့် LC အဖွဲ့ချုပ် (လန်ဒန်: Elsevier), 13 ။
Rosenthal, NE (2002) ။ အဆိုပါစိတ်ခံစားမှုတော်လှန်ရေး: ဘယ်လိုခံစားချက်၏နယူးသိပ္ပံသင့်အသက်တာ Transform နိုင်ပါတယ်။ နယူးယောက်: Citadel စာနယ်ဇင်းစာအုပ်များ။
Salvy, အက်စ်, Nitecki, LA ကများနှင့် Epstein, LH (2009) ။ လူငယ်အတွက်စားစရာဘို့လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများအစားထိုးပါသလား အမ်း။ ပြုမူနေ။ Med ။ 38, 205–212. doi: 10.1007/s12160-009-9145-0
Schaef, AW (1989) ။ နီးစပ်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်: အဆိုပါ Pseudo-ဆက်ဆံရေးစွဲ။ ဆန်ဖရန်စစ္စကို: Harper ကို & Row ။
Schultz, ဒဗလျူ (2000) ။ ဦးနှောက်ထဲမှာအကွိမျမြားစှာဆုလာဘ်အချက်ပြမှုများ။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ 1, 199-207 ။ Doi: 10.1038 / 35044563
Shiffman, အက်စ် (1989) ။ ဆေးရွက်ကြီး "chippers" - ဆေးရွက်ကြီးမှီခိုအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှု။ Psychopharmacology (Berl) ။ 97, 539-547 ။ Doi: 10.1007 / BF00439561
Shiffman, အက်စ်နှင့် Paty, ဂျေ (2006) ။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းပုံစံများနှင့်မှီခို: ခြားနား chippers နှင့်မိုးသည်းထန်စွာဆေးလိပ်သောက်။ ဂျေပုံမှန်မဟုတ်သော။ Psychol ။ 115, 509–523. doi: 10.1037/0021-843X.115.3.509
Shiffman, အက်စ်, Paty, ဂျာ Gnys, အမ်, Kassel, JD များနှင့် Elash, C. (1995) ။ chippers အတွက်နီကိုတင်းရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ပုံမှန်ဆေးလိပ်သောက်: ပုဂ္ဂလဒိဋ္နှင့်သိမြင်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများ။ ကနျြးမာရေး Psychol ။ 14, 301-309 ။ Doi: 10.1037 / 0278-6133.14.4.301
ခိုင်မာတဲ့, G. အများနှင့် Aron, အေ (2006) ။ "အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအရည်အသွေးပေါ်ဝတ္ထုနှင့်စိန်ခေါ်မှုလှုပ်ရှားမှုများတွင် shared ပါဝင်မှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု: ကမြင့်မားတဲ့အပြုသဘောကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကိုထိခိုက် ?," တွင် Intrapersonal နှင့် Interpersonal လုပ်ငန်းစဉ်ချိတ်ဆက်ခြင်း, eds K. Vohs နှင့်အီး Finkel (နယူးယောက်, NY: Guilford), 342-359 ။
Tennov, ဃ (1979) ။ မေတ္တာနှင့် Limerence: မေတ္တာတော်၌တည်ဖြစ်ခြင်း၏အတွေ့အကြုံ။ နယူးယောက်: Stein နှင့်နေ့။
ယော, RE (1996) ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစိတ်ဓါတ်များ၏မူလအစ: စီမံခန့်ခွဲစွမ်းအင်, တင်းမာမှုများနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု။ နယူးယောက်: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်နှိပ်ပါ။
Tucker, DM, Luu, P. နှင့် Derryberry, ဃ (2005) ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်နှိပ်စက်တာ: nociceptive စွမ်းရည်၏ encephalization မှတစ်ဆင့်စိတ်ချင်းစာနာမှုနားလည်မှုစိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ဆင့်ကဲ။ dev ။ Psychopathol ။ 17, 699-713 ။ Doi: 10.1017 / S0954579405050339
Vaillant, G. အ (1983) ။ အရက်၏သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်။ ကိန်းဘရစ်ချ်: ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်နှိပ်ပါ။
ဗန် Berghe, PL (1979) den ။ လူ့မိသားစုစနစ်များ: တစ်ဦးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မြင်ကွင်း။ Westport, မှန် CT: Greenwood နှိပ်ပါ။
Volkow, ND, မုဆိုး, SJ, ဝမ်, GJ, Swanson, JM နှင့် Telang, အက်ဖ် (2007) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းအတွက် Dopamine: ပုံရိပ်လေ့လာမှုများနှင့်ကုသမှုဂယက်၏ရလဒ်များကို။ Arch ။ Neurol ။ 64, 1575-1579 ။ Doi: 10.1001 / archneur.64.11.1575
et al ဝမ်, GJ, Volkow, ND, Telang, အက်ဖ်, ဂြနျေး, အမ်, မာရင်းကျိုသည်ဂျေ, Rao က, အမ်။ (2004) ။ အစားအစာလှုံ့ဆော်မှု appetitive မှထိတွေ့မှုသိသိသာသာလူ့ဦးနှောက်ကိုမြှင့်လုပ်ဆောင်။ Neuroimage 21, 1790-1797 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroimage.2003.11.026
ဝမ်, Z. , ယု, G. အ, Cascio, C တို့, လျူ, Y. , Gingrich, ခနှင့် Insel, TR (1999) ။ အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေး၏ Dopamine D2 အဲဒီ receptor-mediated စည်းမျဉ်း (Microtus ochrogaster): pair တစုံဘွန်းများအတွက်ယန္တရား? ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 113, 602-611 ။ Doi: 10.1037 / 0735-7044.113.3.602
Xu, X တို့မှာ, Aron, အေ, ဘရောင်း, ll, Cao, G. အ, Feng တို့, တီနှင့် Weng, X တို့မှာ (2011) ။ ဆုချခြင်းနှင့်လှုံ့ဆျောမှုစနစ်များ: တရုတ်သင်တန်းသားများအတွက်အစောပိုင်းအဆင့်ပြင်းထန်သောရင်ခုန်စရာမေတ္တာဦးနှောက်မြေပုံလေ့လာမှု။ Hum ။ ဦးနှောက် Mapp ။ 32, 49-57 ။ Doi: 10.1002 / hbm.21017
Xu, X တို့မှာ, Aron, အေ, Westmaas, JL, ဝမ်, ဂျေ, နှင့်အမွှေးအ, LH (2014) ။ ဝတ္ထု / စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်းတွေကိုဆေးလိပ်မှနီကိုတင်း-ဆုံးရှုံးဆေးလိပ်သောက် '' reactivity ကိုတစ်ဦး fMRI လေ့လာမှု။ PLoS ONE 9: e94598 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0094598
Xu, X တို့မှာ, Floyd, AHL, Westmaas, JL နှင့် Aron, အေ (2010) ။ self-ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ဆေးလိပ်သောက် abstinence ။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 35, 295-301 ။ Doi: 10.1016 / j.addbeh.2009.10.019
Xu, X တို့မှာ, ဝမ်, ဂျေ, လဲ့, ဒဗလျူ, Aron, အေ, Westmaas, အယ်လ်, နှင့် Weng, X တို့မှာ (2012) ။ ပြင်းထန်သောအသည်းအသန်မေတ္တာတော်ကိုနီကိုတင်း-ဆုံးရှုံးဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်စီးကရက် cue-reactivity ကို attenuates: တစ်ခု fMRI လေ့လာမှု။ PLoS ONE 7: e42235 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0042235
အငယ်, ဂျေ, Aron, အေ, Park, အက်စ်, Chatterjee, N. နှင့် Mackey, အက်စ် (2010) ။ တစ်ဦးရင်ခုန်စရာ partner ၏ဓာတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းစမ်းသပ်နာကျင်မှုလျော့နည်းစေ: အာရုံကြောဆုလာဘ်စနစ်များပါဝင်ပတ်သက်မှု။ PLoS ONE 5: e13309 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0013309
Zeki, အက်စ်နှင့် Romaya, JP (2010) ။ ဆန့်ကျင်ဘက်များနှင့်အတူတူပင်လိင်ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်များ၏မျက်နှာများကိုကြည့်ရှုဖို့ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှု။ PLoS ONE 5: e15802 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0015802
keywords: ရင်ခုန်စရာမေတ္တာ, စွဲလမ်း, ventral tegmental ဧရိယာ, caudate
ကိုးကား: Fisher ကသူ, Xu X ကို, Aron A နှင့်ဘရောင်း ll (2016) ပြင်းထန်သော, စိတ်အားထက်သန်မှု, Romantic မတ်ေတာသညျမြား: A သဘာဝစွဲ? Romance နှင့်ပစ္စည်းအလွဲသုံးမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဒါကဘယ်လို Fields တစ်ခုချင်းစီကိုအခြားအသိပေးနိုင်သလား။ တပ်ဦး။ Psychol ။ 7: 687 ။ Doi: 10.3389 / fpsyg.2016.00687
Received: 08 ဖေဖော်ဝါရီလ 2016; လက်ခံခဲ့သည်: 25 ဧပြီလ 2016;
Published: 10 မေလ 2016 ။
Xiaochu Zhang ကတရုတ်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ်, တရုတ်
ရီကာဒို de Oliveira-SouzaRio de Janeiro မြို့, ဘရာဇီး၏ပြည်နယ်, ဖက်ဒရယ်တက္ကသိုလ်
Sabine Vollstädt-Klein, Heidelberg တက္ကသိုလ်, ဂျာမနီ
2016 Fisher သည် Xu, Aron နှင့်ဘရောင်း©မူပိုင်။ ဒါက၏စည်းကမ်းချက်များအောက်မှာဖြန့်ဝေထားတဲ့ Open-access ကိုဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည် ကို Creative Commons Attribution လိုင်စင် (CC ကို BY)။ သည်အခြားဖိုရမ်များအတွက်အသုံးပြုခြင်း, ဖြန့်ဖြူးသို့မဟုတ်မျိုးပွားခွင့်ပြု၏, မူရင်းစာရေးဆရာ (s) သို့မဟုတ်လိုင်စင်ထုတ်ပေးပေးအပ်အသိအမှတ်ပြုကြသည်နှင့်ဤဂျာနယ်အတွက်မူရင်းထုတ်ဝေကိုးကားကြောင်း, လက်ခံပညာသင်နှစ်အလေ့အကျင့်များနှင့်အညီ။ အဘယ်သူမျှမသုံးစွဲခြင်း, ဖြန့်ဖြူးသို့မဟုတ်မျိုးပွားဤဝေါဟာရများနှင့်အတူလိုက်လျောမခွင့်ပြုထားပါသည်။
* ပေးစာယူ: Lucy ကိုအယ်လ်ဘရောင်း, [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]